Ingabe kufanele kukhunjulwe ukuzila ukudla e-Halacha kukhunjulwa ukuQothulwa Kwesizwe? (Ikholomu 4) - Rabi Michael Avraham
Ingabe kufanele kukhunjulwe ukuzila ukudla e-Halacha kukhunjulwa ukuQothulwa Kwesizwe? (Ikholomu 4)
18 imibono	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
Njalo ngonyaka kuphakama umbuzo wokuthi kungani izazi zingabeki usuku lokuzila ukudla noma usuku lokukhumbula inkumbulo yokuQothulwa Kwesizwe. Uma ukuzila ukudla kwenziwa ngenjongo yokukhumbula ukubulawa kukaGedaliya Ben Ahikamu noma ukubhidlizwa kwezindonga lapho kuvinjezelwa iJerusalema, cishe usuku olunjalo kufanele lubekwe njengesikhumbuzo sokuQothulwa Kwesizwe, okungenani okwakungejwayelekile futhi kuyinhlekelele. , futhi kithi okuningi okuphathelene nezihloko nezithinta inhliziyo. Izimpendulo zivame ukuzungeza umbuzo we-halakhic igunya namandla. Abanye babambelele eqinisweni lokuthi asinaso isikhungo esifanelekayo (iSanhedrin) esingabeka usuku oluyisibopho kuKlal Israel. Abanye bathi lokhu kungenxa yobuncane bethu (ukwehla kwezizukulwane ezikhunjulwa kahle). Lezi zizathu zizwakala zilula kakhulu. Uma i-Purim Frankfurt noma i-Casablanca ingasethwa, futhi uma i-legumes noma ama-smartphone noma amathelevishini ingavinjelwa, khona-ke cishe kukhona igunya futhi kukhona amandla e-halakhic okwanele okukhiqiza imithetho emisha lapho kudingeka.
Abaningi bayibona njengo-Yvonne we-halachic, futhi ngicabanga ukuthi kukhona inani elilinganayo lobulungisa kuyo. Kukhona ngempela ukungabaza lapha kokusha, funa izincazelo zephulwa. Ukwesaba ukuguqulwa noma iZionism (esiteji esilandelayo bazoqala ukugubha uSuku Lokuzimela kwa-Israyeli). Kodwa ngifuna ukunikeza umbono obanzi nohlukile lapha, ngalo mbuzo.
Isici esibalulekile emfundweni yezenkolo yethu sonke ukuphelela kwe-halakhah. Kufanele ukuthi ihlanganise yonke into, umhlaba wonke uyahlonishwa futhi kunendawo engenamuntu. Yonke into, futhi ikakhulukazi izinto ezibalulekile, kufanele idlule ku-reactor yokuhlola i-halachic futhi ibe ngeyakho. Olunye uhlangothi lohlamvu lwemali ukuthi angeke kube khona amanani abalulekile noma izenzo ezingangeni ku-halakhah futhi zibe yingxenye yayo.
Isibonelo, abaningi bafuna isitatimende senhlalonhle-yomnotho se-halakhah. Ingabe i-halakhah yentando yeningi yezenhlalo, i-capitalist (inkomba: lena impendulo eseduze) noma ngamakhomanisi? I-Morning News ishicilela i-athikili esho ngentshiseko ukuthi i-halakhah ye-socialist injani, ikhuthaza ubulungisa obusabalalisa, i-capitalist, i-communist nokunye okunjalo.
Umcabango ojwayelekile wazo zonke lezi zikhundla ukuthi i-halakhah ngokuqinisekile iyinto yazo zonke lezi. Ngingathanda ukuphika lapha lokhu kucabangela okuvamile, futhi ngikwenze kumazinga amabili: a. Angicabangi ukuthi kungenzeka ukukhipha ku-halakhah isitatimende esingaguquki ngalezi zindaba nezinye ezifanayo. B. Asikho futhi isidingo sokwenza lokhu. Asikho isizathu sokuthi i-halakhah ibe nesitatimende esinjalo. Manje ngizozama ukunaba kancane.
A. Ingabe i-halakhah inesitatimende esicacile sombono?
I-Halacha iqoqo lezisho eziningi eziye zavela ezizukulwaneni ngezizukulwane, ezindaweni eziningi nangaphansi kwezimo ezahlukene kanye nabantu abahlukene. Ayinakho njalo ukuhambisana endizeni ye-meta-halachic. Njengesibonelo esibolekiwe, sizothatha izinqumo zikaMaimonides ngendaba yezintshumayelo. Ngisho nokucabanga ukuthi banokungaguquguquki kwe-halakhic, cishe abagcini ukufana kwe-meta-halakhic. Njengoba kwaziwa kahle, kunokungaboni ngaso linye phakathi kwe-Beit Midrash ka-Rabbi Akiva kanye no-Rabbi Ishmael mayelana nendlela iTorah okufanele ifunwe ngayo (ye-Rish - evamile neyimfihlo, kanye ne-RA - ubuningi nedlanzana. Bheka i-Shavuot XNUMXa nokuhambisanayo ). Kunezinkinga ezimbalwa eziletha imithelela ehlukile ye-halakhic kule mpikiswano ye-meta-halakhic. U-Maimonides ulawula i-halakhah kwezinye zalezi zindaba, futhi njengoba sengibonise kakade kwenye indawo kuvela ukuthi ngezinye izikhathi ubusa njengombono we-halakhic oncike entshumayelweni evamile neyimfihlo futhi ngezinye izikhathi ubusa njengombono oncike ebuningini nasezintweni ezincane. Ayigcini ukufana kwe-meta-halakhic.
Ngicabanga ukuthi i-halakhah ngokuvamile ingaba nokuvumelana kwe-halakhic (futhi nalokhu kuyisitatimende esiyihaba kancane ngokombono wami), kodwa akubonakali kunokuvumelana kwe-meta-halakhic noma i-ideological, okungukuthi iveza ukuhleleka, ubukhomanisi, i-capitalist noma okunye. indikimba encanyana yezenhlalo-mnotho. Imithombo ehlukene isiyisa eziphethweni ezihlukene, akuzona zonke ezibophezelayo, akuzona zonke ezisebenza kuzo zonke izimo, kunezincazelo ezihlukene eziningi zazo, ngakho-ke akunakwenzeka ukuthola kuzo i-mishnah ehlelekile. Ngezinye izikhathi akunakwenzeka ngisho nokukhipha isinqumo esicacile se-halakhic, kodwa ngokuqinisekile akunandaba nemeta ye-halakhic ehlelekile.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi inkinga akubona ubunkimbinkimbi, ubuningi bemithombo, noma obunye ubunzima ekwenzeni lokho. Ngiphikisa ngokuthi cishe ayikho into ebizwa ngokuthi i-sub. Noma ubani okhipha i-mishnah enjalo ku-halakhah ngombono wami uyazikhohlisa ngayo, noma okungenani uhileleka ekwakhiweni kokutolika okuyimpikiswano. Njengenkomba, angicabangi ukuthi ngiyazi kunoma yimuphi walabo ababhekana nalezi zinkinga abaye bashintsha ngokuyisisekelo izikhundla zabo zombono ngemva kocwaningo lwe-halakhah (ngaphandle mhlawumbe ngesimo esithile lapho bathola isitatimende esicacile se-halakhic). Ingxoxo enjalo ayilokothi ihambe njengesilungiselelo somgomo ngemva kokudutshulwa komcibisholo. Noma ngubani oyiSocialist uyothola kuyiTorah iSocialism yakhe, futhi kuyafana nangonxiwankulu nanoma yimuphi omunye ongaphansi kwezenhlalo nezomnotho. Lokhu kuphakamisa izinsolo eziqinile zokungathembeki kobuhlakani. Abantu bacabanga ukuthi kufanele kube nesimo senhlalonhle-yomnotho emcabangweni, bathola isikhundla esinjalo ngaphakathi kwabo, bese beqala ukusebenzisa ubuciko bokuhumusha obungagculisi, izingcaphuno ezikhethiwe ezivela emithonjeni ekhethiwe nokunye okunjalo, ukuze bathole okuthile okuqinile kulokhu kudideka kwe-anarchic.
Ngizokwengeza omunye umbuzo emaphethelweni emagama ami: Ake sithi ngiphumelele ngempela ukukhipha ku-halakhah ukuhlukaniswa okuhlelekile kwe-ideological-socio-economic, kufanele lokho kungibophe? Iqiniso lokuthi eminye imithetho isekela umbono othile wezenhlalo nezomnotho alingiphoqi ngempela ukuthi ngiwuthathe. Ngingazibophezela futhi ngisebenzise le mithetho (uma ngempela ibophezela) ngaphandle kokwamukela umqondo oyisisekelo. Okushiwo ukuthi uma lo mbono uneziphetho ezengeziwe ezingazange zibekwe ku-halakhah njengezibophezela - angizizwa ngibophekile kuzo. Okungenani ngingasho ukuthi nami nginokungahambisani kwe-meta-halachic. Sengikhombisile ukuthi ngihamba kahle kulolu daba, cha?
Kimina kubonakala sengathi noma ngabe i-halakhah ine-will kulezi zindawo, isitatimende esithembeke kakhulu engingasho ngaso ukuthi i-halakhah idinga ukuthi sisebenzise ingqondo futhi senze ngendlela ehloniphekile nenengqondo. Kusukela manje kuya phambili, wonke umuntu uzozinqumela ngokwakhe ukuthi yini enengqondo nokuthi yini enengqondo futhi azakhele owabo umbono wenhlalakahle yezomnotho. Lo mbono uyintando yeTorah neHalacha kuwo. Kepha lokhu kusezingeni lokuqala kuphela, inqobo nje uma sicabanga ukuthi ithiyori inaso ngempela isifiso sethu ezindaweni ezinjalo. Manje sizodlulela ezingeni lesibili.
B. Ingabe kufanele kube nokuma okucacile kwemibono emcabangweni?
Manje kufanele sizibuze ukuthi kungani nakancane sithatha ngokuthi kufanele kube nesimo se-ideological in theory kule mibuzo? Angiyiqondi le imperialism ye-halakhic, futhi ngombono wami wonke ayiwagcini amanzi. Asikho isikhundla esinjalo futhi akufanele kube khona. Hhayi nje ngoba i-halakhah yenzeka ukuthi ingabhekani nale mibuzo, noma ngenxa yokuthi kunzima ukukhipha isikhundla kuyo ngenxa yobunzima obuhlukahlukene (ibid.), Kodwa mhlawumbe ngenxa yokuthi (= iqoqo le-halakhic?!) iphinde yakhetha (mhlawumbe ngokungazi ) ukungazibandakanyi kuzo futhi unganqumi ngazo. Akababoni njengobuntu bakhe futhi ngenxa yalokho uyabashiya ngaphandle kombuso wakhe.
Ngingathanda ukunikeza lapha enye ithisisi kunaleyo eyamukelwe. Sonke singabantu, futhi ingxenye yeqembu labantu bangamaJuda. UmJuda kuqala futhi ngokuyinhloko umuntu bese kuba umJuda, njengoba uMoharram Tzitzaro Zatzokal asho: "Akukho lutho lomuntu olungaziwa kimi" (ibid., Ibid.). Ngasikhathi sinye nalokhu kuhlukaniswa phakathi kwalezi zitezi ezimbili, kungenzeka futhi ukuhlukanisa umhlaba we-value (Jewish!?) ube yizitezi ezimbili: 1. Iphansi lomhlaba wonke, eliqukethe amanani omhlaba wonke ngakolunye uhlangothi kanye namanani omuntu ngamunye okunye. 2. Isitezi se-halakhic samaJuda.
Isitezi sokuqala siqukethe amanani angadingi ukufakwa ku-Halacha. Abanye ngenxa yokuthi babopha yonke into emhlabeni hhayi nje amaJuda (asemhlabeni wonke), kanti abanye ngenxa yokuthi ubukhona babo kufanele kwenziwe ngokuzithandela futhi ngabanye hhayi ngendlela efanayo yokubopha kithi sonke njengoba kudingwa endaweni ye-halakhic.
Leli hlaya laziwa ngegama likarabi wasePonivez owalengisa ifulegi ophahleni lwePonivez yeshiva eBnei Brak njalo ngoSuku lweNkululeko futhi naye akazange asho sicelo, kodwa akazange adumise. Lapho uNkulunkulu ethi uyiSiyoni njengoBen-Gurion, uBen-Gurion akazange athi dumisa noma ancenge. Abaningi be-Ultra-Orthodox engizwile bahlekisa kakhulu ngaleli hlaya ngezindleko zamaZionists ayisiphukuphuku namabi, kodwa angicabangi ukuthi baye bangena ekujuleni kwencazelo yalo. Inhloso karabi kwakuwukusho ukuthi ungumZiyoni wezwe, njengoBen-Gurion. I-Zionism yakhe ayiyona inkolo, kodwa iyinani lesizwe, futhi ngenxa yalokho uzinikele kuyo ngisho nangaphandle kokungena ku-halakhah. Usuku Lokuzimela luyiholide lezwe eligujwa urabi wase-Ponivez, futhi wayengenaso isithakazelo ekunikezeni umlingiswa ongokwenkolo nokuligxilisa emithethweni ye-halakhic.
Buyela Osukwini Lwesikhumbuzo SokuQothulwa Kwesizwe
Namuhla, abantu bakwa-Israyeli bakhumbula ukuQothulwa Kwesizwe ngezindlela ezihlukahlukene, ezinye zazo ezibekwe emthethweni kanye nasezinkalweni zomphakathi jikelele kanti ezinye zazo ezingezomuntu ngamunye. Lezi zindlela ezinjengalezi kimi zibonakala zingenelisa ngokuphelele, futhi angitholi sidingo noma isizathu sokuziqinisa emithethweni ye-halakhic, ngisho noma namuhla bekukhona indikimba enekhono engenza kanjalo. Bangabesitezi sokuqala kulezi ezimbili ezichazwe ngenhla, futhi asikho isizathu sokuzithuthela kwesibili. Usuku Lwesikhumbuzo SokuQothulwa Kwesizwe luwusuku lwesizwe olungenazo ezenkolo, futhi akukho lutho olungalungile ngalokho. Ayilahlekelwa inani layo, futhi akulona iqiniso ukuthi yonke into yenani kufanele ifakwe ku-halakhic noma ngisho nohlaka lwezenkolo.
Ngendlela efanayo, ngoSuku Lokuzimela, ngokuqinisekile ngithi indumiso kuNkulunkulu futhi idumise uNkulunkulu, kodwa angiboni njengosuku lokubaluleka kwezenkolo futhi ngokuqinisekile aluyona i-halakhic. Incazelo yawo ingeyezwe lonke, futhi mina njengeSiyoni sezwe (njengoRabi wasePonivez noBen-Gurion) ngijoyina kulesi sisekelo kuphela. Angisho ukuthi uHillel ngoba uRabi Omkhulu unqume ukuthi kukhulunywe uHillel, futhi lokhu akubangelwa nje ubudlelwano bami owaziwayo nalesi sikhungo. Ngithi ukudumisa ngoba ngibona kulungile futhi kuhle ukwenza njalo. Lena indlela yami njengomuntu okholwayo ukuveza isimo sami sezwe.
Ngakho kwakunjani esikhathini esidlule?
Esikhathini esidlule, ngempela babegxilisa yonke intengo kanye nazo zonke izibopho zenani ku-halakhah. Izazi nenkantolo yizo ezibeka izinsuku zokuzila nokujabula kanye nezikhathi zethu. Kodwa ngicabanga ukuthi kuwumphumela wesimo sokwenziwa lapho kungekho nkosi kwa-Israyeli. Umbhali wezintshumayelo zikarabi ukhuluma ngezinhlelo ezimbili ezifanayo zikahulumeni, inkosi kanye nenkantolo. Ngesizathu esithile emithonjeni yeSages cishe akukho ncanyana yesimiso senkosi ibonakala. Inkantolo ilungisa imigwaqo ngesikhathi (sub-MOC), okusho ukuthi bebenguMnyango wezokuThutha. Bachibiyela imithethonqubo futhi basungule izinqubo, imithetho yokuvota emphakathini inqunywa i-halakhah futhi ivela ku-Shulchan Aruch. Yebo, badinga nemvume yomuntu obalulekile (= umlamuli). Kodwa ngicabanga ukuthi kuwumphumela weqiniso lokuthi iToshba'ap yasungulwa ngesikhathi lapho kwakungekho nkosi kwa-Israyeli, futhi igunya likahulumeni wezwe wezwe lasuka enkosini laya ku-BID enkulu. Ngakho-ke abongameli beSanhedrini babevela enzalweni yendlu kaDavide, njengoba babekhonza njengamakhosi empeleni. Kusukela lapho kuze kube namuhla sesijwayele ukuthi abukho ubuzwe bezwe futhi yonke into ingeyabaxazululi kanye nenkantolo kanye nokwenkolo yethu kanye ne-halakhic dimension. Esikhundleni sokuthi inkosi inqume ukuziphatha kwethu ngale kwe-halakhah, i-BD ishaya futhi ijezise ngokungafanele. Leli gunya le-BID liwukubonakaliswa kwegunya lenkosi kuhulumeni wasekuqaleni.
Njengengxenye yento efanayo sajwayela ukuthi yonke into yayiyiTorah futhi konke kwahamba. Ukuthi akukho ukuphila komuntu okuvamile, futhi ngokuqinisekile akukho zimiso, ngaphandle kwe-halakhah. Ukuthi konke kufanele kwenziwe futhi kunqunywe ngabaxazululi kanye norabi. Kodwa namuhla likhona ithuba lokubuyela esimisweni. Abantu bakwa-Israyeli banombono wezwe wezwe kuBH (BH hhayi ngokuphathelene nezwe kodwa ekubuyeni kwesimo sezwe sokuphila kwethu sonke. Abanye baye babhekisela kuso njengokubuyela kwethu esigabeni somlando). Asikho isizathu sokuqhubeka nokunamathela kufomethi esesiyijwayele ngenxa yezifo ezihlukahlukene zomlando.
Sengiphetha, ngokuphambene nama-intuitions akhona, ukudingiswa akuzange nje kunciphise insimu ye-halakhah (nakuba lokhu futhi kwenzeka ngandlela thile) kodwa futhi kwayinweba ngaphezu kokufunda okufanele kweminye imikhakha. Umuntu kufanele abuyele esimisweni futhi angazikhathazi ngokweqile ngesimo se-halakhah ngokubhekisela kuma-impiriyali kuyo kanye nezinhlaka zayo futhi ayivumele ibe ngaphansi kwamaphiko ayo zonke izikhala zokuphila kwethu. Uma sichaza abazala bethu abangamaKristu, masingangeni esihogweni: sinikeze umthetho lokho onakho, nenkosi (noma umuntu) lokho anakho.
Ngenkululeko Yokuveza, Ukuphika UkuQothulwa Kwesizwe kanye nokuthi "Ungalindi" (Ikholomu 6)
Umthetho Wezakhiwo ku-Halacha noMthetho
I-Holocaust Appropriation and Sectorality - to Adi Ofir (Haaretz Books - 2001)
18 Imicabango ethi “Ingabe kufanele kube nokuzila ukudla eHalacha ukukhumbula ukuQothulwa Kwesizwe? (Ikholomu 4) ”
29 Elul 09 - 2016/14/53 ngo-XNUMX:XNUMX
Awucabangi yini ukuthi nakuba i-mishnah ehlelekile ingatholakali ku-Halacha njengoba iye yalolongwa ezizukulwaneni ngezizukulwane, umuntu angathola eyodwa okungenani ongqimbeni lweTorah ebhaliwe? Ngibone encwadini yenu ethi God God ukudlala amadayisi nithi iBhayibheli alikhulumi ngezindinganiso zokuziphatha kodwa likhuluma ngezindinganiso ezingokwenkolo. Okusho ukuthi, ngokwamazwi enu (ngokuqonda kwami ​​konke) yonke inkolo yobuJuda, iTorah ebhaliwe kanye neTorah yomlomo ingeyengqimba ephuma empilweni evamile yomuntu futhi iwela esigabeni "senkolo". Futhi ngiyabuza ukuthi yisiphi leso sigaba "senkolo", sisho ukuthini? Into nje engenangqondo yomuntu oyigcinayo? Futhi ukuthi noma ubani ocabanga ukuthi kukhona iphuzu kuma-mitzvos akusho ukuthi kufanele abekwe ezingeni elivamile nelibalulekile kumuntu / umphakathi / ubuntu? Futhi lokho, ngokwesibonelo, akunakwenzeka ukuthola kusuka ku-mitzvah yezimiso zezomnotho ze-shemita njengoba kwenza uJabotinsky?
Kubonakala sengathi umnyakazo owethulwe lapha kufanele uqhutshekwe ngesinyathelo esisodwa. Kimina, ukudingiswa akuzange nje kudale i-imperialism yenkolo kodwa ngokuvamile kwakha isigaba senkolo, ungqimba olungekho eBhayibhelini. Imiyalo yanikezwa ukuze kuzuze izwe kuqala futhi okubaluleke kakhulu "ukwenza kanjalo phakathi kwezwe." Ngicabanga ukuthi ukuzila esikubambayo manje kumele nakho kuphathwe njengoba usho uSuku LokuQothulwa Kwesizwe namuhla, ezingeni likazwelonke.
Ngingathanda isithenjwa sakho.
Ngicabanga ukuthi okokuqala amaqiniso awatholi. Imizamo eyenziwe ayigculisi ngempela. Kubalulekile ukungalinaki iqiniso futhi silibeke ngaphansi kwezifiso zethu (ngisho noma kufanelekile futhi kuhle). Ngicabanga ukuthi nakuTorah ebhaliwe ayifani neze. Yebo amanani ajwayelekile wonke umuntu avumelana ngawo uzowathola yonke indawo. Kodwa ukutadisha kweTorah noma i-Halacha akushintshi, ngokubona kwami, noma yini emibonweni ozenzele yona (futhi lokhu kuyiqiniso ngombono wami, ukuthi abantu bathola lokho abakufunayo).
Ngiyavuma ukuthi kumaSages kwakungekho mehluko phakathi kokuziphatha nenkolo futhi mhlawumbe namaRishoni. Ngomqondo othile ukudingiswa kwadala lo mehluko (futhi ngokuvamile, umlando we-halakhah ukudalwa kokwehluka okwakungekho ngaphambili. Owokugcina wenza imibono engekho ku-mishnah nokunye). Kodwa ngokubona kwami ​​kuyinkulumo ethi umhlaba uyathuthuka (futhi awuhlehli). Manje sesiyaqonda ukuthi kunezinhlobo ezimbili zamanani, eziningi zamakhosi ethu azihlonze phakathi kwazo. Isibonakaliso salokhu (okusisiza ukuba sibone lokho abangakuqaphelanga) ukuthi siyabona namuhla ukuthi kungenzeka ukuba nokuziphatha noma ngaphandle kokuzinikela enkolweni. Pho kungani ucabanga ukuthi ukuzibophezela okungokwenkolo kwenzelwe izinjongo zenkolo? Ngalo mbono ayidingekile namuhla.
Ngokuqondene nokuhunyushwa kwezinjongo zenkolo, ucabanga ukuthi awekho amanani angaphezu kwamagugu okuziphatha. Lona umcabango engingaboni isisekelo kuwo, futhi ngokuqinisekile hhayi lapho ngibheka iTorah neHalacha. Ngokwengxenye enkulu kakhulu yezinto kubonakala kimi ukuthi ukuhleleka kokuziphatha akutholakali. Pho kungani sicabanga ukuthi wonke umuntu uhloselwe ukuziphatha kahle? Ngokubona kwami ​​sekukhona futhi ukubambelela ezifisweni zenhliziyo nokungawanaki amaqiniso.
1. Kuyacaca ukuthi i-alibi isifundo sebhayibheli, uma iBhayibheli liyizigaba ezihlukene ezimele izikole ezahlukene kanye nemibono yomhlaba, akukho lutho ongakhuluma ngalo. Kodwa uma samukela ingxenye yesambulo yeBhayibheli, ngempela ngokubona kwami ​​isimo esithile singahlelwa noma sicwengisiswe ngokuhlolwa kwamavesi. Isibonelo nje ukuhlobana kweBhayibheli nobukhosi wudaba engicabanga ukuthi lungaxoxwa ngalo ngokuhlaziywa kokuhlaziya okunzima. Ngokwesibonelo, ngicabanga ukuthi uMaimonides, owabona ecaleni lenkosi incwadi yokumiswa kwenkosi yakwa-Israyeli, wayishaya indiva incazelo elula yaso sonke isahluko esilapho. Singase singakwazi ukukholisa omunye oqinisekile ngesikhundla sakhe (njengoba cishe ngeke sikholise uDawkins) kodwa ngokuqinisekile, ngicabanga ukuthi ukutadisha iBhayibheli kungaholela ekuqondeni okusha ezindabeni eziningi. Ngokujwayelekile umbono wami uthi akumele kube khona ukungqubuzana phakathi kokuziphatha komuntu nalokho okulotshwe eTorah njengoba u-Abrahama wakhala ebhekene nokubhujiswa kweSodoma. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi ngempela iBhayibheli lilodwa alanele ukudala umbono wokuziphatha kahle kusukela ekuqaleni kodwa liyasiza.
2. Angiqondi ukuthi iqiniso lokuthi kungenzeka ukuba nokuziphatha ngaphandle kokuzibophezela kwezenkolo libonisa kanjani ukuthi kunezigaba ezimbili. Angisho ukuthi inkolo kuphela enokuziphatha kodwa ngokuqinisekile ukuthi injongo ye-mitzvos ingeyesigaba esifanayo. Iqiniso lokuthi umuntu akakwazi ngaso sonke isikhathi ukuqonda ukunambitheka kwe-mitzvos akudingi ukwamukelwa kwesigaba "senkolo". Kwesinye isikhathi siswele ingqikithi yomlando ukuze siqonde ngokumelene nalokho okubalulekile okuvelile kodwa lokhu akusho ukuthi isizathu sokuziphatha asikho. Ikakhulukazi njengoba ungakanginikezi incazelo eqondile "yenani lenkolo." Kuleli qophelo, angikwazi ukucabanga ukuthi kukhona isigaba "sezenkolo" engingazi ukuthi yini "yokugcwalisa izimbobo".
1. Akufanele kube khona ukuphikisana, kodwa umbuzo uwukuthi ingabe likhona yini ithuba lokuvuselela. Ingabe umuntu angasithola isifundo seBhayibheli esingamukeleki kuye futhi aguqule umbono wakhe ngemva kokufunda kwakhe. Angicabangi ukuthi lokho kuyenzeka. U-Abarnel owaphika ubukhosi wathola ukukhulelwa kwakhe eBhayibhelini, futhi uMaimonides ongazange aphike wathola ukukhulelwa kwakhe. Kungokufanayo nanamuhla.
Kuyacaca ukuthi noma yisiphi isifundo kunoma yimuphi umkhakha nakunoma iyiphi incwadi noma ifilimu sivula imibuzo futhi singashintsha imibono. Kodwa uguquko luzokwenziwa ngenqubo yangaphakathi hhayi ngenxa yegunya leBhayibheli (ukuthi njengoba ngithole isiphetho esihlukile lapho ngiyaziphoqa ukuba ngiguqule isimo sami endabeni ethile).
2. Anginayo incazelo yokubaluleka kwezenkolo. Kodwa njengesibonelo ngithi icala lomkaCohen owazanywa ukuhlukana nomyeni wakhe alibonakali kimi njengecala ngenjongo yokuziphatha. Inhloso yawo ukulondoloza ubungcwele bobupristi. Lona umgomo ongokwenkolo nokuziphatha okubi. Ngisho nokuvinjelwa kokudla ingulube akubonakali kimi njengokuvinjelwa okunjongo yakho iwukuziphatha. Kungashiwo njalo ukuthi kunenhloso yokuziphatha esingayiqondi sonke. Lesi isitatimende esingenalutho, futhi angisiboni isizathu sokucabanga kanjalo.
Ingxabano yami yayiwukuthi uma inhloso ye-mitzvos inokuziphatha, khona-ke ama-mitzvos awabalulekile (okungenani namuhla). Phela, umgomo wokuziphatha ungafinyelelwa ngisho nangaphandle kwabo (futhi kulokhu ngilethe ubufakazi obuvela kubantu abaziphatha kahle abangaboshiwe yi-halakhah). Ngakho-ke kuyini iphuzu lokugcina umthetho? Ziziphathe kahle futhi wanele.
1. Kodwa namuhla ngingeza futhi nginqume phakathi kwengxabano phakathi kukaMaimonides no-Abarbanel futhi nginqume ukuthi umbono kaMaimonides ubonakala uqhelelene nobulula bamavesi ngokwamathuluzi okuhumusha okutadisha iBhayibheli. Lokhu akusho ukuthi ngiziphoqa ngokuzenzakalelayo kodwa njengoba usifundise (njengoba ngikuqonda) ngokwendlela yokwenziwa ayikho into enjengokushintsha kwesimo ngokuqondile ezingxoxweni kodwa kuphela ngenqubo yokukhuluma. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi ukufunda amavesi ngenkolelo yokuthi lona umbhalo ogunyaziwe kunganquma ekugcineni kwenqubo ngokuvumelana noshintsho lombono.
2. Futhi angiqondi ukuthi kungani ukudala isigaba esingenayo incazelo kungenalutho kune-agumenti yami yokuthi asizange sizuze yonke inzuzo yemithetho. "Inani lezenkolo" kuze kube manje akusho lutho kimi, kubonakala sengathi kugcwele izimbobo. Mayelana nombuzo wokuthi kungani kufanele kugcinwe i-mitzvos uma kungenzeka ukuba nokuziphatha ngaphandle kwe-mitzvos. Ngicabanga ukuthi kuyenzeka ngiphendule ukuthi nge-mitzvos kungenzeka ukuthi kube nokuziphatha okuhle, noma ukuthi yilokhu okushiwo yizazi lapho izazi zithi "i-mitzvos ayinalutho ngekusasa elizayo". Mina ngokwami ​​ngicabanga ukuthi ngempela amanye ama-mitzvos aseyiqedile indima yawo yomlando njengobugqila futhi amanye asalinde ukugcwaliseka kwawo.
1. Bese unquma. Umbuzo uthi kungani ingabagculisi labo abacabanga ngendlela ehlukile kweyakho? Ngakho-ke ngiyangabaza ngekhono lokwakha imibono nezimiso ezivela eBhayibhelini kanye ne-Halacha. Kuwe kubukeka sengathi u-Abhabhaneli kodwa kuyangicacela ukuthi yingoba awuyena owasebukhosini. Khuluma nabasebukhosini futhi uzobona ukuthi bakhipha amasignali futhi babonise umbono ohlukile (okuphambene nalokho okubhalayo ngombono wami kunendawo). Kodwa umbuzo wenkosi uyisibonelo esibi, ngoba iTorah ibhekisela kuyo ngokucacile. Ngikhuluma ngemibuzo ye-halakhic engacacile kanye nemibono. Ngezinga elifanayo ungangilethela futhi ukuthi iTorah ikhuthaza ukukholwa kuMvelinqangi.
Thatha kalula, iqiniso liwukuthi akuholeli ekushintsheni kokubona.
2. Ukuthi into ethile ayinayo incazelo akusho ukuthi akukho phuzu lokukhuluma ngayo (futhi hhayi njengama-positivists). Amagama ka-Muharram R. Piersig aziwa encwadini yakhe ethi Zen and the Art of Motorcycle Maintenance mayelana nencazelo yomqondo wekhwalithi, nangenxa yokuthi amaGreki (amabi) akhipha ubuchopho bethu ngeqiniso lokuthi yonke into kufanele ichazwe. . Uma ucabanga ukuthi ngicabanga ukuthi uzofinyelela esiphethweni sokuthi awazi ukuthi ungawuchaza kanjani umqondo wokubaluleka kokuziphatha. Awukho umqondo oyisisekelo ongachazwa. Nginilethele isibonelo senani lenkolo: ubungcwele bobupristi, ubungcwele bethempeli nokunye okunjalo.
Ulethe isibonelo sobugqila, kodwa wazenzela ukuphila okulula. Ngikhuluma ngeningi leTorah neHalacha. Abazange bafeze indima yabo, kodwa abazange babe nenani lokuziphatha. Ngakho zenzelweni? Usho isitatimende sethiyori ukuthi nge-mitzvos umuntu angaba nokuziphatha okuhle. Angiboni inkomba yalokho. Hhayi ekuhlolweni kwe-mitzvos nokuhleliwe (iningi alihlangene nokuziphatha), noma ekuboneni iqiniso ngokwalo. Ngakho-ke ngokubona kwami ​​lezi zibuhlungu kakhulu futhi akuwona umbono ophusile weqiniso.
29 Elul 09 - 2016/14/54 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngokwazi kwami ​​konke, ubona ukusungulwa kombuso njengesigameko semvelo (ngaphandle kokungenelela kukaNkulunkulu). Uma kunjalo, ikuphi ukutuswa kukaNkulunkulu okufanele kushiwo kulo mongo?
Impela, ngiyaqonda ukuthi namuhla akukho ukubandakanyeka kukaNkulunkulu emlandweni, hhayi kuphela ekumisweni kombuso (futhi noma kukhona anginayo indlela yokwazi ukuthi kwenzeka kuphi futhi nini). Ngakho-ke, uma kwenzeka into ejabulisayo (= "isimangaliso"?) Kuyithuba nje lokusho indumiso njengesivumo sokudalwa komhlaba nendalo yami.
29 Elul 09 - 2016/14/55 ngo-XNUMX:XNUMX
Angizange ngiqonde ngokubona kwakho ukuthi uyini ngempela umehluko phakathi kokuzinikela ku "Dina Damlakhuta Dina" okwakugxilwe futhi kusebenza e-halakhah ngisho nangaphansi kokubusa kwabeZizwe ekudingisweni, kanye nesimo namuhla, mhlawumbe usho ukuthi lokhu okungenhla. umthetho wawusebenza kuphela emithethweni ephakeme Ezindaweni ezengeziwe kanye namanani wendawo yonke nokunye okunjalo?
Angizange ngiwuqonde umbuzo
Ngizocaphuna ingcaphuno emazwini akho: “Njengengxenye yendaba efanayo, sajwayela iqiniso lokuthi yonke into yayiyiTorah futhi konke kwahamba. Ukuthi akukho ukuphila komuntu okuvamile, futhi ngokuqinisekile akukho zimiso, ngaphandle kwe-halakhah. Ukuthi konke kufanele kwenziwe futhi kunqunywe ngabaxazululi kanye norabi. Kodwa namuhla likhona ithuba lokubuyela esimisweni. Abantu bakwa-Israyeli banombono wezwe wezwe kuBH (BH hhayi ngokuphathelene nezwe kodwa ekubuyeni kwesimo sezwe sokuphila kwethu sonke. Abanye baye babhekisela kuso njengokubuyela kwethu esigabeni somlando). Asikho isizathu sokuqhubeka nokunamathela efomeni esesiyijwayele ngenxa yezifo ezihlukahlukene zomlando.” Futhi ngalokho ngiyabuza: phela, halakhah ngisho nangesikhathi lapho "ngenxa yezono zethu sadingiswa ezweni lakithi," noma kunjalo sasingaphansi kokubusa okuthile okunqunyiwe (okubuye kuvele ku-array ngaphandle kwe-halakhah) nganginobuqiniso be-halakhic. , kuze kube yilapho ifakiwe esigabeni esithi "Dina Damlakhuta Dina", ngakho-ke ibuphi ubukhulu obubalulekile obungezwe embonweni?
Ngethemba ukuthi manje sengizicacisile kabanzi.
Ngaqonda. Kodwa ukubusa ngaphansi kwabanye abantu kuyasikhathaza futhi akufiseleki kithi. Kuliqiniso ukuthi uDina Damlakhula unobuqiniso be-halakhic, pho? Ingabe lokho kwakusho ukuthi kuhle ukuhlala ngaphansi kodonga uFranz Josef? Okujabulisayo ukuthi sesibuyele ekulawuleni izimpilo zethu ngokwethu hhayi ukuthi kunobuqiniso be-halakhic.
Ngiyabonga kakhulu ngokucacisa izinto! Uzothola imiyalo namandla aqondile.
29 Elul 09 - 2016/14/58 ngo-XNUMX:XNUMX
Ukube inzilo bekuwumcimbi kazwelonke nje ucabanga ukuthi ngabe basinda? Ingabe umcimbi owenziwa endaweni yesifunda ungangena ngempela esikhundleni somthandazo owenziwa kuwo wonke amasinagoge?
UkuQothulwa Kwesizwe kuyisenzakalo esinamandla kakhulu ngosuku lweshumi lwe-Tevet noma ukuzila kukaGedaliya. Ngokubona kwami ​​akungatshazwa ukuthi indlela engcono yokuyidlulisela ezizukulwaneni ezizayo wusuku lwezenkolo lokuzila, okuwusuku lokuzila ukudla njengenjwayelo. Bangaki abantu (abangokwenkolo) obaziyo abazi iNkosi uJehu? Futhi bangaki abamaziyo uGedaliya Ben Ahikamu na?
Okufanele ngikwenze? AmaJuda azikhumbula kahle izinto eziphathelene nokudla, kungakhathaliseki ukuthi iholidi noma ukuzila ukudla. Umlando ukhombisile ukuthi isebenza kangcono kakhulu. Nobufakazi bokuthi awekho amaholidi esizwe amaJuda asaphila (Megilat Ta'anit) ngaphandle kwezinsuku ezamukelwa eHalacha.
Lesi isimangalo esibalulekile. Ngibhekana nombuzo wokuthi i-halakhah idinga noma ilindele ukusetha usuku olunjalo lokukhumbula. Umbuzo wokuthi yini ephumelela kakhulu wehlukile futhi kufanele kuxoxwe ngawo ngokwehlukana.
Mayelana nombuzo wesibili, umbono wami uthi uma bekhohlwa - bazokhohlwa. Kwesinye isikhathi izehlakalo ziba ziqhelelene futhi zingabi nandaba (akubonakali kubalulekile ngempela namuhla ukukhumbula uGedaliya noma uJehu). Ukuphawula kwakho kusekelwe embonweni owandile wokuthi inkolo ne-halakhah kufanele inikeze izinsizakalo kumagugu esizwe nawendawo yonke yabantu. Angivumelani nalokho.
29 Elul 09 - 2016/15/01 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngizwile izinto eziningi ngawe kusukela ezinsukwini zokufundisa kwakho eJeruham kubangane bakaRabi u-Uriel Eitam.
Ngifunde ngokulangazela i-athikili yenu emayelana nokusetha ukuzila koSuku LokuQothulwa Kwesizwe, ngivumelana neningi lezinto.
Ngizwe izikhathi eziningi kuRabbi Amital ongasekho: "Akuyona yonke into ewumbono weTorah." "Akukona konke okudingeka kushiwo nge-Da'at Torah" nokunye
Jabulani emazwini enu mayelana nokudumisa ngoSuku Lokuzimela.
Kungenzeka kanjani ukuthi sidumise isimangaliso esenzekayo bese sithi asinayo inkolo? Noma angizange ngikuqonde ukuthi uthini.
Cabanga ngesitatimende esidale (ukuhlukanisa) ngemuva kokuya endlini yokugezela. Ingabe ukuvuma kuNkulunkulu ukuthi uvule imigodi yami kunengxenye yenkolo kukho? Ingabe isidlo sasekuseni engisibingelelayo ngaphambi nangemuva kwaso sinesici sezenkolo? Kimina izwe lifana nezindlu zangasese noma isidlo sasekuseni.
Mayelana nokudumisa isimangaliso, lowo ngomunye umbuzo. Umbono wami ukuthi azikho izimangaliso namuhla (noma okungenani azikho inkomba yokuthi zikhona), futhi akukho nhlobo ukuzibandakanya kukaNkulunkulu emhlabeni. Lapho kwenzeka izenzakalo ezijabulisayo kithi, njengokumiswa kombuso, kuyisiqalo sokubonga uNkulunkulu ngokudala umhlaba nendalo yethu siqu. Kodwa ngizonaba kulokho eGaza (?) Encwadini engibhala njengamanje ngemfundiso yenkolo yamanje.
Kodwa ingabe sinegunya lokulungisa izibusiso ngokwethu ngenxa yoSuku Lwenkululeko?
Lokhu kumele kuxoxwe ngakho. Okungenani ngezindlela ezithile (i-Meiri) kunomthetho wokusho indumiso kuzo zonke izimangaliso zensindiso nokuvuma izono, bese kubonakala sengathi umuntu kufanele abusise ngisho nangaphandle kokulawulwa okukhethekile. Njengesibusiso sokudla ihhabhula njalo uma sidla futhi kungadingeki silungise isibusiso kuwo wonke ama-apula.
Kunoma yikuphi, awukho umkhawulo wokudumisa ngaphandle kwesibusiso.
Futhi kunendawo enhle kaSabra ukuthi noma ngesibusiso akunamkhawulo. Uma u-Israyeli ngemva kwesimangaliso sikaChanukah wayezothi Hallel ngokuzibusisa ngaphandle kokulawulwa yizazi, nokuthi kwakunenkinga ngalokho? Abanye balabo bokuqala babusiswa ngesiko, futhi kulolu daba kuxoxwa ngesibusiso sokudumisa uqobo. Kodwa kulokho ngiyangabaza, njalo njalo.
Kunzima kimi ukubona i-State of Israel "njengenkonzo."
Abantu bakwa-Israyeli babuyela kwa-Israyeli ngemva kweminyaka eyi-2000. Okubi kakhulu ukuthi umbuso awuzange usungulwe eminyakeni engama-20 ngaphambili….
Ngenxa yesifunda kukhona iqoqo lamakhadi okuposa. Uhulumeni ozimele wabuyela kubantu bakwa-Israyeli. Izinkulumo zeZazi zibizwa ngokuthi "izinsuku zikaMesiya."
Ukudumisa akukhona nje isimangaliso kodwa kuyinsindiso
Isimangaliso akukona nje ukwephula imithetho yemvelo kodwa ukwephula imithetho yomlando noma logic.
Kukuphi okunye lapho siveze khona icala lapho abantu abahlakazekile emaphethelweni omhlaba babuyela ezweni labo ngemva kweminyaka eyizi-2000?
Kuhlalisa yena. Unjiniyela. Iqembu lamakhadi enziwe kuwo. Isiphi esinye isibonelo esikhona?
Abaprofethi babengeke yini bakufise lokhu embonweni wabo?
Phela ukube eminyakeni engu-80 edlule ngabe batshela uMoridekayi waseMorocco noLibish wasePoland ukuthi banjalo. Amadodana abo nabazukulu bayoba ndawonye ezweni lakwa-Israyeli ngaphansi kokubusa kwabantwana bakwa-Israyeli futhi bayokwakha imindeni ndawonye. Bangasho ukuthi ifana nendlu yangasese?
Lapho ngiqhathanisa i-State of Israel nezinkonzo, ngangingaqondile ukusho ukuthi izwe alilutho noma linyanyeka njengezinkonzo. Bengiqonde ukusho ukuthi umbuso uyindlela (ebalulekile) kithina, futhi akukho okunye. Ngijabula kakhulu ngokuthi lokhu sinakho, futhi empeleni iminyaka eminingi bekungakafiki, kodwa nokho angikuboni njengento ebaluleke kakhulu engokwenkolo. Ikakhulukazi iyinani lezwe. Ngempela ukufika kukaMesiya kuyisithembiso esifana nokunikeza imvula. Izinsuku zikaMesiya nazo azikho ukubaluleka kwezenkolo njengoba kungekho kugcinwa kwe-mitzvos, kodwa ngokuvamile kuyindlela ezosivumela ukuba sigcine imitzvos (iThempeli, njll.). Ukuceba futhi kuyindlela yokugcina imiyalo, futhi akwenzi ingcebo yenzuzo yenkolo. Umbuso uyindlela, futhi iqiniso lokuthi kade lingekho kithi futhi sasilifuna futhi sahlupheka ngaphandle kwalo liyasidida kakhulu (njengomuntu ompofu obona imali njengenani ngenxa yokucindezeleka kwakhe) .
Ngokuqondene nezimangaliso kukhona ukudideka okunenzuzo enkulu. Konke ukungenelela kukaNkulunkulu emhlabeni kuyisimangaliso. Ukungenelela kusho ukuthi into bekufanele yenzeke ngaphandle kokungenelela (ngokwemithetho yendalo) bese kungenelela uNkulunkulu kwase kwenzeka okunye. Lokhu kusho ukwephulwa kwemithetho yemvelo. Okungukuthi, isimangaliso. Akukho ukungenelela kukaNkulunkulu emvelweni okungesona isimangaliso.
Ubungqayizivele bokubuyela kwethu kwa-Israel ngikwazi kahle futhi ngivumelana nakho. Ingabe lokho kusho ukuthi kube nesimangaliso lapha? Ukungabaza okukhulu emehlweni ami. Lesi isenzakalo esingokomlando esingajwayelekile.
Ngangingawuqondi umehluko. UNkulunkulu wathi uzothumela umprofethi kungenjalo lizokuna. Senze mitzvot, uzonquma nini ukungani? Ngemva kwesonto? ngenyanga? isizukulwane? Uzonquma kanjani ukuthi wenze mitzvot noma cha? Mingaki imiyalo okufanele yenziwe? Abanye abantu? Konke lapha akunakuphikiswa ngempela. Kungumbuzo wokuvela okuvamile hhayi ukuphikiswa. Njengoba ngibhalile, isiphetho sami sokuthi uNkulunkulu akangeneleli akuwona umphumela wokuphika okungenasici kodwa umbono.
Manje sengiyaqonda ukuthi usho ukuthini ngokuthi "inkolo" ngakho-ke ngiyaqonda ukuthi amagama asho uMbuso wakwa-Israyeli futhi ukusungulwa kwawo akunayo incazelo engokwenkolo, ngibona igama elithi "inkolo" linencazelo ebanzi futhi ngenxa yalokho emehlweni kaKibbutz Galuyot njll. inencazelo enkulu yenkolo.
Kunjalo nangezinsuku zikaMesiya, futhi angingeni lapha endabeni yokuthi kuyacaca ukuthi lizoba khona ithempeli lokuza kukaMesiya, akulula neze.
Ngokuqondene nezimangaliso, ngihlanganyela umbono wokuthi "kusasa ilanga lizophuma" - lokhu akusona isimangaliso. Ukugcwaliseka kwemithetho yemvelo akusona isimangaliso.
Ngihlanganyela ngokuphelele isikhundla sokuthi yonke into ayiyona isimangaliso, njengoba abanye abantu bethanda ukusho.
Kodwa ukuhlanganisa abadingiswa ngamaqembu futhi babuyele kwa-Israyeli ngemva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili, isenzakalo esingenakulinganiswa nabanye abantu, akuyona into engokwemvelo.
Kuyiqiniso ukuthi akukho ukuwela ulwandle noma "ilanga e-Givon Dom" lapha, kodwa kukhona okwenzeka lapha okungeyona yemvelo, eyingqayizivele ngohlobo lwayo kanye nohlobo. Ngokusobala nakuleli phuzu asivumelani.
Izimpikiswano ezimbili zidinga ukuhlukaniswa: 1. Ukusungulwa kombuso kanye nokuqoqwa kweqembu labadingiswa kwakuyisimangaliso. 2. Lokhu okubili kunokubaluleka kwezenkolo. Akukho ukuncika kuzo zombili izinkomba. Kungaba khona isimangaliso esingenakho ukubaluleka kwezenkolo (njengokuvula izimbobo kulabo abacabanga ukuthi kuyisimangaliso), futhi-ke kungaba nencazelo yenkolo futhi akusona isimangaliso. Ngiphikisa ngokuthi akukho okubonisa ukuthi lokhu kuyisimangaliso (i-anomalies akusona isimangaliso), futhi futhi akukho ukubaluleka kwezenkolo (NgingumZayoni wezwe). Njengoba kushiwo, kungenzeka ukuthi ungavumelani kunoma yisiphi salezi zimangalo ezimbili ngokwehlukana noma kuzo zombili ndawonye.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi lelizwe libe ukukhula kokuhlengwa kwethu (inshallah), futhi kuzokwakhiwa ithempeli kulo futhi ukuhlengwa kuzovela ngalo. Kodwa nokho akunakubaluleka okungokwenkolo emehlweni ami. Kuyinkundla yezwe eyenzelwe izinjongo zezwe kanye nezisusa zezwe. Izenzo ezinjalo azisho lutho ngokwenkolo.
Okusho ukuthi, incazelo yenkolo, ngokombono wakho, idinga inhloso yenkolo?
Isenzo somuntu sinokubaluleka kwezenkolo kuphela uma senziwa ngenhloso yenkolo (A.A. Leibowitz). Nakuba ama-mitzvos engayidingi inhloso kodwa iku-mitzvos kuphela (ngenxa ye-sabra yengqikithi njengegama elingahleliwe). Futhi ikakhulukazi ukuthi ngakufakazela esihlokweni (emini, ukwehluleka kwezwe eseqinisweni) ukuthi yonke imibono yemithetho idinga ukholo. Ukomisa amaxhaphozi okungenzelwanga izulu nangenxa ye-mitzvah (ukuhlala kwa-Israel) akusizi ngalutho kwezenkolo. Inenani lesizwe.
Lesi yisimo esidingekayo kuphela kodwa akwanele. Isenzo ngokwaso kufanele sibe nenani lenkolo, futhi yiTorah kuphela echaza lokho. Umuntu oma ngonyawo olulodwa ngenxa yesizathu senkolo edabukile akanalutho lwenkolo kulo.
UMaimonides kuyi-Mo'an kuyi-Pentateuch uhlukanisa phakathi komuntu owenza “ezithweni zakhe” nomuntu owenza ngenhloso nenjongo.
Kuyacaca ukuthi liyini izinga eliphezulu.
Umbuzo uthi sizokuchaza njengokungahambisani nenkolo noma yisiphi isenzo umuntu asenza ngaphandle kwenhloso? Ngiyavuma ngokomthetho kodwa lolu wucwaningo oluyimpoqo kwabaningi bakwa-Israyeli, kusekhona okunye okusiza kanye namagugu omsebenzi "hhayi ngenxa yawo".
Esihlokweni sami mayelana nensingo ka-Oakham ngachaza ukuthi ukungenzi ngaphandle kokholo akukwenzi ngenxa yakho. Akuwona neze umkhuba wenkolo. Bheka uRambam Sufach ovela kuMakhosi. Okholwayo futhi engenzi ngamabomu, lapha kufanele ahlukanise phakathi kwe-mitzvos nalokho okungachazwa ngokuthi i-mitzvah. Ukufunda kahle kuyinto enhle, kodwa akulona ithuluzi lokucacisa iqiniso. Futhi wabona kubahlaziyi (uRambam noRabbeinu Yonah nabanye) mayelana neMishnah ku-Avot (uHoy Dan wonke umuntu kwesokudla) ababhala ukuthi baxoxa lapha kuphela ukuthi inengqondo, ngokuphambene nombono ovamile. Futhi ngabhala ngakho ezihlokweni zami ze-BDD ngensingo ka-Oakham.
Uma urabi engacacisa ukuthi usho ukuthini ngokuthi "inani lenkolo." Okusho ukuthi, ukubaluleka kwenkolo kuphela ukugcinwa kwe-mitzvah ngokwayo (incazelo exolelwa urabi ngoba ngiyaqonda ukuthi akayithandi, uLeibowitzian), ingabe iyinoma yini esiza ukugcinwa kwe-mitzvah eyenziwa ngaphandle kwezenkolo? ukuqwashisa, nangale kwalokho: Kuyinani lenkolo uma kungenjalo.
Ngiyabonga, futhi ngiyaxolisa uma ngibuyisela urabi ezingxoxweni ezindala nezikhohliwe ezisuka enhliziyweni.
Ukuthula okukhulu Inani lenkolo lisho ukubaluleka emsebenzini kaNkulunkulu. Ukubaluleka kwenkolo akuwona nje umyalo njengoba ukukhulekela uNkulunkulu kubanzi kunomthetho. Ngisho nangaphambi kweShulchan Aruch, inenani elingokwenkolo. Impela, isimo siyafuneka ukuthi senziwe ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu.
Ngokwami ​​ukwahlulela okuhle umbuso awunanzuzo yenkolo nganoma iyiphi indlela. Umbuso uyisidingo sami / sethu hhayi inani. Ngifuna ukuhlala phakathi kwabantu bami naseZweni lakwa-Israyeli okuwumlutha wethu womlando. yilokho kuphela.
Mayelana nombuso obuswa i-halakhah umuntu kufanele axoxe ngokuthi unaliphi inani (njengoba umbuso ungelona ithuluzi nje lezakhamuzi), kodwa umbuso ofana nowethu awunalo ukubaluleka kwezenkolo.
Mayelana neNFM angazi ukuthi ufuna yiphi iNFM (ngaphandle nje kokucwengwa kowesifazane). Lezi yizinto ezimbili ezihluke ngokuphelele: iyisidingo futhi iyinani. Kuthiwani uma into enhle noma enhle? Lezi yizinto ezimbili nje ezihlukene.
Bengiqonde ukusho ukuthi, iyini incazelo yokubaluleka kwezenkolo ngale kwencazelo oyibekile? Yini okufanele ibe umehluko phakathi kwe- mitzvah, noma ukubaluleka kwenkolo, futhi yini engisizayo ekubeni khona kwayo? Noma angizange ngiwaqonde amazwi karabi futhi nalokhu kuwumbuzo oyinyumba, njengoba lo mqondo awunayo incazelo ngale kwencazelo yawo? Ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuchaza umehluko phakathi kokuhle nokuhle, noma kungenjalo ngamagama, kanye ne-NPM phakathi kwabo. (Isib.: Angicabangi ukuthi ngizothola umuntu ozonikela ngokuphila kwakhe ngenxa yobuhle, kuyilapho kuhle yebo, ngenxa yokuthi ubuhle abunayo incazelo ebaluleke ngokwanele, okungenani ngokombono wami).
post Scriptum. Ubona isimo (njengoba ngisiqonda) njengento enenani likazwelonke kuphela, hhayi njengokusiza ngisho nokugcina i-mitzvos. (Nakuba uthi okusizayo ekugcineni imithetho akubhekwa njengokubalulekile okungokwenkolo.) Ngokwendlela yakho kungani ngempela uthi indumiso? Isiqalo sokuvuma izono ngokudalwa komhlaba kungaba ngisho noma ngikhushulelwa iholo noma kwaphuma enye incwadi kaHarry Potter, kodwa akekho umuntu ovamile ongasho indumiso ngayo. Uma ngempela umbuso unenani lesizwe kuphela, futhi ungenakho ukwethulwa ohlelweni lokukhulekela uNkulunkulu, mina esikhundleni sakho ngeke ngikubheke njengesisusa esihle sokudumisa. Urabi uzokwazi ukuchaza ukuthi ucabangani futhi uwela kuphi umngcele?
Ngiyabonga, uxolo kanye nonyaka omusha omuhle.
Kunzima kimi ukuba nengxoxo ngezikhawu ezinjalo.
Akukho okubalulekile kwezenkolo okufika enkathini ye-mitzvah. Ngokuphambene, i- mitzvah iyisibonelo sento ethile eyigugu elingokwenkolo. Kodwa nasezenzweni zokuziphatha kukhona ukubaluleka nokubaluleka kwezenkolo (intshe ngoba iwukugcwaliseka kwentando kaNkulunkulu). Ngokuphambene, ukwanelisa isidingo sokungazi akunanzuzo yokuziphatha noma engokwenkolo. Umuntu ufuna izwe ngendlela afuna ngayo ukudla kwasekuseni noma indlu. Kuwukugcwaliseka kwesidingo hhayi ukubaluleka. Lapho isidingo esibalulekile empilweni yakho sigcwaliseka (njengokusindisa impilo yakho) lesi yisizathu esihle sokusho indumiso. Angiboni ukuthi yini engaqondakali lapha nokuthi yini okumele ichazwe.
Ingabe umbuso uvumela izindinganiso zenkolo ukuthi zigcinwe? mhlawumbe yebo. Kodwa ukudla kwasekuseni kanye nomholo nakho kuyakuvumela.
29 Elul 09 - 2016/15/03 ngo-XNUMX:XNUMX
Ukulandela lezi zingxoxo ezingenhla ngithanda ukubuza imibuzo embalwa engiyibuzwe ngokubona kwami ​​kokubili esihlokweni nasezingxoxweni ezigxile kulokhu.
A. Ngokuqonda kwami, oNgangezwe Lakhe akakholelwa ekuphatheni ngomqondo wokungenela koMdali nokudala “izimangaliso” ezinjengoMbuso wakwa-Israyeli, ukuhlanganisa abadingiswa ngamaqembu, njll., ikakhulukazi njengoba “izimangaliso” ezincane “ezenzekayo” kumuntu ofana "nemali" yawa endaweni abengayilindele.
Ngibuze, [ngokwesihloko ovame ukwethula okuningi], mayelana nokuziphendukela kwemvelo ubhale ukuthi abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu babheka i-evolution ngaphakathi kwemithetho ngenkathi umi eceleni ubheke imithetho yangaphandle bese ubuza ukuthi 'ngubani odale le mithetho', nalapho ubona lowo mthetho. yakhiwe ngale ndlela iholela ekudalweni, uphetha ngokuthi uNkulunkulu wadala umthetho ngale ndlela, okungukuthi, ukuthi uNkulunkulu wadala 'umthetho wokuziphendukela kwemvelo'. Uma kunjalo, noma mayelana nezimangaliso, kuyiqiniso ukuthi ngombono 'wokukha phezulu' futhi olula kubonakala kithi ukuthi yonke into ingokwemvelo, futhi inkambo yabantu bakwa-Israyeli ezizukulwaneni ngezizukulwane inezincazelo zemvelo, njengokusungulwa koMbuso. State of Israel, kodwa uma sibheka ngaphandle bese sibuza Okufana nalokho okwaprofethwa abaprofethi neTorah, mhlawumbe singasho ukuthi uMdali wayihlela futhi wayiqondisa yonke le nqubo 'yemvelo' ngenjongo, futhi ebheka ngaphandle kwenqubo nemithetho yemvelo ngaphakathi. it, inganikeza isithombe sokuhlinzeka? [Ngisho mayelana nezimangaliso ezincane le angle yokubuka ingathathwa].
B. Omunye umbuzo, ngabe lokhu kusho ukuthi anikholelwa ezimangalisweni ezilotshwe kuTorah kanye nakuMprofethi, futhi zibonakala ngokubheka phezulu njengokuphika imithetho ye-physics njengokuthi: udondolo oluba inyoka, isinkwa esehla ezulwini. , amanzi aphenduka igazi, inqola namahhashi akhuphuka esivunguvungwini sasezulwini, Njengeqoqo lezinganekwane?
okwesithathu. Ngaphezu kwalokho, kuthini lokhu ngokukholelwa kwakho ekwazini uNkulunkulu ngezenzo zomuntu, ngokukha phezulu kubonakala sengathi ukuntula ukuqondisa akukushayi mkhuba ukwazi uNkulunkulu, kodwa kubonakala sengathi ukujula kunemithelela yalezi zinkolelo komunye nomunye, njll. Umqondo 'womvuzo nesijeziso' wendlela yakho awukho, ngakho-ke amazwi akho asho ukuthi 'izwe elilandelayo' inkolelo ehlakaniphile engasekelwa yiTorah [ngiyavuma impela, kodwa abaprofethi nemibhalo inokuningi ukwesekwa okucacile], ukungakholelwa kulesi simiso, ukuphinda amazwi kaLeibowitz, Ukuthi yonke 'inkokhelo' ye-mitzvah iwukuthi nje ngizibophezele ukwenza njalo, ingabe lokho kusho ukuthi wena? Uma kunjalo ngethemba ukuthi kusobala kuwena ukuthi ababaningi abangeke bangabaze ukujoyina le nkolo, kungani ngizifaka ohlelweni lwemithetho esiphelelwe yisikhathi nesiphelelwe yisikhathi [uyavuma futhi ukuthi izinqumo eziningi nezinqumo zenza ize ukunambitheka kwazo iminyaka neminyaka] kungani kungenjalo ' yamukela' ingxenye kuphela yaleso simiso semithetho, wena kuphela Obalulekile, yini engalungile ngemithetho yoMbuso wakwa-Israyeli?
D. Kuzwakala kulokho okushilo ukuthi ukholelwa emqondweni 'weTorah evela ezulwini' [ngaphakathi komkhawulo othile njengoba ngaqonda ukuthi uyazamukela izisho ezithile zabagxeki beBhayibheli], futhi ngaphandle kwalokho kufanele ukholelwe embonweni we 'isiprofetho'. Futhi ngabuza, kungani nalapha ningasebenzisi umqondo ofanayo [kunengqondo futhi ngokombono wami ukusho], ukuthi yonke into engingayiboni anginasizathu sokucabanga ukuthi ikhona, okungukuthi cishe iminyaka engu-2500 akekho oye wayibona. isiprofetho ukuthi siyini nokuthi kufanele sibonise kanjani, futhi uyakholelwa Ngokusekelwe eziprofethweni ezingabalulekile ezake zaba khona [isiprofetho esidlule sasilingana nale nkambo: yenza okuhle yiba okuhle, okubi kube kubi, zonke izinqubo ezafika kamuva ziyenzeka. singachezuki endleleni yemvelo], pho kungani ungamane ucabange ukuthi ayikho into ebizwa ngokuthi isiprofetho futhi iwumcabango Wabantu basendulo futhi njengoba ingekho namuhla yayingekho kudala, futhi njengoba thina wake wacabanga ukuthi kukhona imimoya namademoni neziphonso nezibonakaliso zezinkanyezi nezinye izinganekwane ezinhle, cabanga ukuthi kukhona isiprofetho, ngokuyisisekelo ngithi izimangalo zakho ngamazwi akho, anginaso isizathu sokukholelwa esiprofethweni uma a. Angiyiboni ekhona namuhla. B. Ngingazichaza zonke iziprofetho ngokwemvelo. okwesithathu. Nginesisekelo esizwakalayo sokukholelwa ukuthi kudala abantu babengenawo umehluko omuhle futhi basungula ukuthi babeprofetha noma bakucabange.
A. Okokuqala, angazi ukuthi udumo lwami lukholelwani noma alukholelwa, ngiseduze nalokho engikukholelwayo (noma engingakukholelwa). Mayelana nengikukholelwayo, impela anginakho inkomba yokuthi zikhona izimangaliso ezenzeka emhlabeni wethu. Mhlawumbe zikhona kodwa angiziboni. Lokhu akufani nezimpikiswano zami mayelana nokuziphendukela kwemvelo njengoba kunengxabano ephoqa ukuba khona kwesandla esiqondisiwe (umdali), kanti lapha kuyinto engenzeka kuphela.
Ngaphezu kwalokho, isimangaliso sichazwa njengokungenela kukaNkulunkulu emhlabeni, okungukuthi, ukuguquka endleleni yawo evamile. UHoy uthi umnyakazo ngokwemithetho bekufanele kube ngu-X futhi uNkulunkulu wawushintsha waba ngu-Y. Uma nje nginencazelo engokwemvelo ngokwenzekayo, angiboni ukuthi kungani ngithatha ngokuthi kukhona ukungenelela. Futhi uma kungumuntu okhiqiza ukuziphatha kwemvelo, khona-ke ngikhuluma ngalokho. Lokhu ukudalwa kwemithetho.
B. Ezincwadini zami ngizochaza ngokuningiliziwe ukubhekisela kwami ​​​​ezincazelo ezingaphezu kwemvelo emithonjeni ehlukahlukene. Ngokuvamile, kungenzeka ukuthi esikhathini esidlule uNkulunkulu wangenela kakhulu (khona-ke kwakukhona izimangaliso futhi kwakukhona isiprofetho). Namuhla angiziboni izinkomba zokubandakanyeka okunjalo kukaNkulunkulu.
okwesithathu. Angizange ngiqonde lapha. Kuthiwani ngokuntuleka kokuqondisa? Kukhona ukugadwa kwezenzo zomuntu kodwa akukho ukungenelela (okungenani hhayi njalo).
Ukuzinikela kuTorah kanye ne-mitzvah akulele emvuzweni nasekujezisweni kodwa kusemsebenzini wokwenza lokho uNkulunkulu akuyalayo. UMaimonides usebhale kakade ekuphawuleni kwakhe ngamathemba ezisebenzi okuthola umvuzo nokwesaba ukujeziswa. Mhlawumbe yingakho lezi zinkolelo mayelana ne-UAV zadalwa. Futhi mhlawumbe bangempela, kodwa angazi.
Umbuzo wezilinganiso, ozojoyina futhi ngubani ongeke, awubalulekile endabeni yeqiniso. Umbuzo uthi ngiqinisile yini hhayi ukuthi ngizoduma yini. Ngiphikisa amanga angcwele (ukuqamba amanga ukuze nginamathisele abantu abaningi emsebenzini kaNkulunkulu). Ukube kungenxa yomfanekiso wendlovu kaMaimonides. Labo abahlanganyela emsebenzini benza kanjalo ngenxa yephutha, ngakho basebenzela uNkulunkulu ongalungile, futhi ukujoyina kwabo kunenzuzo encane.
Kuyini ukuxhumana nemithetho yoMbuso wakwa-Israyeli? Nokuthi lowo ozibhekayo uphuma emsebenzini wakhe ongokwenkolo? Kungani ungakhulumanga ngemithetho yeFIFA (Football Association)?
D. Nalokhu kuzochazwa encwadini yami. Okunye kwalokhu kuxoxwa ngakho ezincwadini eziyiqiniso nezingazinzile (engxoxweni yofakazi bosuku). Lapha ngizochaza kafushane. Nakuba imithetho yemvelo iqhutshwa ngendlela efanayo ngaso sonke isikhathi, kodwa abantu bayashintsha. Futhi lokho abake bakucabanga bacabanga namuhla? Futhi yini abake bayenza namuhla? Bake bagqokani namuhla? Pho kungani ucabanga ukuthi ukuziphatha kukaNkulunkulu akushintshi? Uma kufanele ngithathe isinqumo ngingamane ngikuqhathanise nabantu hhayi nemvelo engaphili. Asikho isizathu sokucabanga ukuthi uzoziphatha ngendlela efanayo ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke uma esenqume ukuhamba kancane emhlabeni, angiboni njengento exakayo noma engaqondakali. Ngokuphambene nalokho, ngine-hypothesis yokuthi kungani lokhu kwenzeka. Njengengane okuthi uma isikhulile uyise ayishiye yedwa igijime izimele. Sinjalo nesimo sengqondo sikaNkulunkulu ngathi. Ukuhamba kwakhe akukhona ukwehla kwezizukulwane njengoba sikujwayele, kodwa ukuvuka (ukuvuthwa) kwezizukulwane. Namuhla sesivele siqonde ukuthi kukhona umholi wenhloko-dolobha ngisho nangaphandle kwezimangaliso. Sinekhono lefilosofi ngokwanele ukuba siqonde ukuthi izwe elibuswa imithetho engaguquki lifakaza kakhulu ngoMdali kunezwe elingenangqondo. Ngakho manje awusadingi izimangaliso. Okungenani ukube besiziphatha futhi sicabanga njengabantu abadala, njengoba kulindelekile kithi. Bakhona ngempela abanye abanomqondo wengane, kodwa kubo cishe kulindeleke ukuthi bakhule.
Ukulandela le mpendulo, uthe "ngokuqinisekile kungenzeka ukuthi esikhathini esidlule uNkulunkulu wangenelela kakhulu." Kodwa kukhona amavesi eTorah akhuluma ngokungenela ezizukulwaneni ngezizukulwane (futhi nganika imvula ezweni lenu ngesikhathi esifanele, futhi nganika izimvula zenu ngesikhathi esifanele, njll.). Kungashiwo kanjani ukuthi uNkulunkulu (okubonakala sengathi wayazi ukuthi wayezonqamula ukuxhumana naye esikhathini esithile) wabhala izithembiso “zokuvuza” ayehlose ukuziyeka esikhathini esithile? Phela, uma umzali ethembisa ingane yakhe uswidi ukuze iziphathe kahle, ngisho noma ingane isikhulile, umzali ulindeleke ukuba asifeze isithembiso sakhe, akunjalo? Futhi uma efuna ukuyeka ucansi, okungenani kufanele achaze ukuthi kungani (sakhula, njll.).
Ku-Torah futhi kumayelana nabaprofethi, iziprofetho nezimangaliso, futhi nabo banyamalele. Ithempeli nemihlatshelo nakho kwanyamalala. Kanjalo nobugqila futhi buyanda. Sithole ukuthi kwesinye isikhathi iTorah ikhuluma nabantu besikhathi sokunikeza iTorah, futhi kunezinguquko iTorah engakhulumi ngayo. Umuntu angaqagela ukuthi kungani, kodwa lawa amaqiniso.
Ngokuqondene nabaprofethi, iziprofetho, izimangaliso, ithempeli, imihlatshelo, ubugqila, njll, lezi yizinto ezingenaso isithembiso esiyokuma izizukulwane. Kunezibonelo kuphela ukuthi zenzeka esikhathini esithile, kodwa kungani singalindela ukuba zibe khona nasesikhathini esizayo? Kodwa mayelana nomvuzo nesijeziso, u-Gd wabhala ngokucacile kuyiTorah ukuthi kukhona ukuxhumana kwezizukulwane phakathi kokugcinwa kwe-mitzvos kanye nomvuzo othile, ngakho nginesizathu esihle sokulindela ukuthi lokhu kuhlotshaniswa kuzoba khona esikhathini esizayo, futhi uma siphetha awukho umbuzo oqinile wamaqiniso eTorah, akunjalo? Okuwukuphela kwencazelo engingayicabanga ngalo mbuzo izitatimende ezinjengalezi: "Umvuzo we-mitzvah esiqhingini sase-Alma Likha" futhi-ke kuyodingeka sisiphule amazwi angabonakali emavesini afana nalawa "Futhi nganinika izimvula zenu ngesikhathi esifanele" futhi njengomfanekiso wenkokhelo ezweni elizayo. Kodwa kusenzima, ngoba alikho iBhayibheli elilula kakhulu.
Angizange ngiqonde. Indaba yesiprofetho ihilela imiyalo eminingana. Akufanele yini i-mitzvos ibe ngezizukulwane? Ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu ukulalela uMprofethi nobuholi Bakhe bomoya kithi. Lesi akusona isenzakalo lapho saba nomprofethi. Yilokhu uTorah akuthembisa futhi waze wamyala ukuba azame ukuzwa izwi lakhe. Umprofethi futhi uyingxenye yendlela yokuya empini.
Izithembiso zokuthi uma sigcina imiyalelo siyonikwa imvula, zihunyushwa njengezithembiso eziphathelene nesikhathi lapho imvula incike kuMvelinqangi. Lapho kuncike kuye kuyobe sekunikezwa ukugcinwa okulandelayo. Manje usenqume ukusinikeza ngoba sesikhulile, futhi kuyacaca ukuthi kusukela manje akusabalulekile. Uvele asichazele inqubomgomo yakhe: uma nginikeza okuthile kungenxa yokugcinwa kwemithetho.
Ngokuqondene nomprofethi, kulotshiwe encwadini kaDuteronomi ukuthi: “Ngokuba kuyakuvela umprofethi phakathi kwenu,” asikho isithembiso sokubuyiselwa lapha. Okusho ukuthi, yonke imiyalo ehlobene nokuhlolwa komprofethi iyimithetho ekhona - uma kuzosungulwa umprofethi, makube njalo. Njengokuthi uma ugqoka ingubo enamaphiko amane, kufanele ubeke intshakaza kuyo. I-mitzvah ayilokothi ime, kodwa ngeke isebenze njalo. Kodwa okuhlukile ngamavesi akhuluma ngomvuzo nesijeziso ukuthi anokuxhumana kokuthi uma senza A. - khona-ke uNkulunkulu uzokwenza B. Ubudlelwano ngokwabo abunamibandela kunoma yiziphi izimo. Kubonakala sengathi ukuxhumana kuhlala kukhona. Uma sifika esiphethweni sokuthi lokhu kuxhumana akukho, kubonakala sengathi kukhona ukuphikisana neTorah lapha. Ungaphikisa ngokuthi akuzona zonke izimangalo ezikhona kuyiTorah eziyiqiniso ezizukulwaneni ngezizukulwane. Kodwa-ke uyaphoqeleka ukuthi asho ukuthi nemithetho ngokwayo ingase ishintshe.
Kungani ungasho nje ukuthi nakuba lokhu kuxhumana kungabonakali empeleni, kodwa kukhona ngendlela efihliwe (fihla ubuso)?
Ulethe amavesi akhuluma ngomprofethi wamanga. Phela amavesi akhuluma ngomprofethi (Duteronomi):
Umkhulumeli uMkrbc Mahic Cmni Ikim kuwe u-Ikok uNkulunkulu wakho unkulunkulukazi uTsmaon: Ccl Asr Salt Mam Ikok uNkulunkulu wakho Bhrb eshiya ku-Hkhl, ethi hhayi u-Asf Lsma At Cole Ikok Alhi no-At brigade Hgdlh Hzat hhayi u-Arah One ngaphezulu, no-La Amot: futhi wathi Ikok unkulunkulukazi u-Hitibo Asr Dbro: umkhulumeli u-Akim Lhm Mkrb Ahihm Futhi Mhlawumbe uNeuvena: Futhi i-General Islander, uNkulunkulu ngeke abe nandaba ne-wheragram: " Isiqhingi saseShavua Jacka
Kodwa-ke, incazelo eqondile ayiyona i-mitzvah ekhona kodwa i-mitzvah enemibandela (njengentshakaza). Cishe yonke i-mitzvah enhle inemibandela. I-existential mitzvah iyi-mitzvah engeke iqedwe kodwa igcinwe kuphela. Le mitzvot ingahoxiswa (uma izimo zikhona - gqoka ingubo namaphiko, futhi ungayenzi i-mitzvah).
Mayelana nombuzo wokugcina, kungathiwa uNkulunkulu uhlala engenelela kodwa uma sihlola uphuthuma emgodini ukuze asidide. Lokho kuzwakala kungenakwenzeka kimi. Ngaso sonke isikhathi uma ngibheka okwenzeka emhlabeni izinto zinencazelo yemvelo nejwayelekile. Imithetho yemvelo iyasebenza, futhi uma uyihlola elebhu, okwenzekayo kulindeleke ukuthi kwenzeke. Asikho isizathu sokucabanga ukuthi kukhona igeyimu exakile yokucasha lapha. Lokhu akubona ubufakazi kodwa ukucatshangelwa komqondo ojwayelekile. Uma ngibona umzimba onyakazayo, ukucabanga kwami ​​ukuthi amandla asebenza kuwo hhayi ukuthi uNkulunkulu wanquma ukuwunyakazisa ngaphandle kokuphoqelela. Ngaphezu kwalokho, ngibuye ngicabange ukuthi kunemizimba ehamba ngaphandle kwamandla. Lona umqondo wesayensi owamukelwayo futhi uzwakala unengqondo ngokuphelele futhi usebenza kimi.
Futhi la mavesi awabonisi ukuthi umprofethi uzomiswa nini, noma kangaki. Ngokuvamile, izimangalo ezinjengokuthi: UNkulunkulu uzokwenza u-X akuzona izimangalo ezingaphikiswa (ngoba asikho isikhathi esibekiwe sesimangalo esishiwo). Kodwa izimangalo zohlobo: Uma u-X eyenzeka khona-ke uNkulunkulu uzokwenza ukuthi u-Y aphikiswe uma kubhekwa ukuthi u-X uyenzeka futhi u-Y uyalinganiseka. Ngakho-ke kunezinketho ezintathu zokubhekana nengxabano yesibili. Noma ukusho ukuthi u-X akwenzekanga ngempela. Noma uthi u-Y akalinganiseki. Noma ukusho ukuthi isimangalo siphikisiwe. Kodwa uma iphikiswa, akuwona umbuzo olula mayelana nokunemba kwezimangalo eziseTorah ngokujwayelekile.
Akukho lutho lapha olungaphikiswa ngomqondo wesayensi. Mingaki imiyalo okufanele yenziwe ukuze line? Bangaki abantu okufanele benze le miyalo? Ingakanani imvula ezona, futhi kufanele ine isikhathi esingakanani? Lokhu kufana nokuphikiswa njengendaba yoMprofethi.
Njengoba ngibhalile, umbono wami wokuthi uNkulunkulu akangeneleli awuwona umphumela wokuphikiswa kwesayensi, kodwa umbono ojwayelekile (akubonakali sengathi uyagxambukela). Iqiniso wukuthi kulesi simo esikuso ngithi uNkulunkulu akangeneleli futhi maningi amakholwa acabanga kanjalo. Bacabanga ukuthi lapho benza i-mitzvos liyana futhi ngicabanga ukuthi akukho ukuxhumana. Amehlo akho ayabona ukuthi isimo esiyiqiniso asihlanganisi ukuqinisekiswa noma ukuphikiswa kwanoma yini lapha.
Ngiyaqonda ukuthi akuphikiseki ngokwesayensi, kodwa ngisho nokuvela okuvamile kwanele kimi ukuba ngiphikiswe (hhayi ngomqondo wegama onengqondo wezibalo).
Umehluko phakathi kwendaba yoMprofethi nendaba yezimvula ukuthi ukuxhumana phakathi kwemithetho nomvuzo kufanele (ngomqondo ojwayelekile) kube ngokushesha. Okungukuthi, uma abantu bakwa-Israyeli benza ngokuvumelana nemithetho, impendulo evela kuNkulunkulu inengqondo ukuthi bayofika phakathi nesikhathi esizwakalayo (isho phakathi nezinyanga ezimbalwa hhayi ngemva kweminyaka engama-700). Kodwa endabeni yoMprofethi akukho ukuvinjelwa kokuthi uNkulunkulu athumele uMprofethi oyedwa kanye eminyakeni eyizi-3000. Asikho "inkathi yesikhathi enengqondo" lapha engacatshangwa.
Engizama ukukuqonda ukuthi ukuvala kanjani ukungqubuzana phakathi kombono wakho kanye nomyalezo ocacile ovela emavesini. Ubhale ngaphambili impendulo efana nalena: "Uvele asichazele inqubomgomo yakhe: uma nginikeza okuthile kungenxa yokugcinwa kwe-mitzvos." Ngingayamukela leyo ncazelo. Kodwa ngokubona kwakho kunzima ukusho lo mgomo uma engawufezi?
Uyayifeza. Ezweni uma enikeza okuthile kusuke kulandelwa umyalo. Ezinsukwini zamanje akasaphi, emandulo ubenikela. Namuhla akasathumi abaphrofethi endulo ethuma. Lona umgomo osushintshile (hhayi ukuxhumana phakathi kokupha nokukhuleka kodwa ukuzinikela).
Futhi ngale kwalokho, njengoba nginibhalele, uFook Hezi ukuthi kulesi simo esikhona manje sekuqubuke ingxabano yokuthi uyangenelela noma cha. Ngakho-ke akekho ongasho ukuthi iqiniso ngokwalo libonisa ukungenelela, ngisho nangezizathu zombono kanye nomqondo ovamile. Ngakho-ke noma ngabe ngingubani ungabuza ukuthi iyini inhloso yalesi sitatimende. Mhlawumbe isitatimende esivamile okungafanele sihlolwe ngokomthetho, futhi sibonisa ukubaluleka kwama-mitzvos. Ukubaluleka kwama-mitzvos kusesekhona nanamuhla. Amaqiniso ayashintsha kodwa isifundo singunaphakade.
29 Elul 09 - 2016/15/04 ngo-XNUMX:XNUMX
Ake siqale ngoMnumzane Tsitsro, khona-ke incazelo yeDerech Eretz Kedma eya eTorah ayintsha futhi uma kungeyona incazelo kukhona nje uhlobo oluthile lokuhlubuka lapha [Nginobuntu ngaphandle kokuba yisigqila sika-Gd]
Ngoba kunendabani ngempela uma imithethonqubo iyi-halakhic noma yezombangazwe ngaphandle nomuzwa wokuthi imithetho yezombangazwe ivela emithethweni [yabantu] ekhanyisiwe kanye ne-halakhic iyacasula futhi iyahawukela,
Ngokuqondene noRabi wasePonivez, lesi sicelo si-halakhah, kanjalo nokwehluleka kwakhe ukusho, kuyacaca ukuthi akashongo indumiso ngenxa ye-halakhah futhi umceli akazange asho ngesizathu esifanayo ngokubona kwakhe,
Kuyacaca futhi ukuthi usho ukuthi uHillel ngoba nakhu kwakunqunywa ihalakhah, njengoba ubungeke usho ukube bekungenjalo,
Mayelana nokushicilelwa kokuntuleka kokuqondisa kwa-Israyeli, futhi kungani kusiza futhi kubani,
“Umkhuleko ongaphendulwanga,” kufanele kusondele kakhulu ekusondezeni abantu bakwa-Israyeli eduze kukaNkulunkulu wabo nokubaxhumanisa noMdali wabo.
Futhi lokho, futhi, uvelaphi?
Ngikhalela ukucasulwa okunjalo, uyindoda ehlakaniphile, ngitshele ngesipiliyoni sakho esiphambene,
Angiphikisani nemizwa. Wonke umuntu nemizwa yakhe.
Ngisho noma njengoba usho konke kwahamba (futhi lokhu akulona iqiniso), umbuzo usalokhu ukuthi lo mthetho ubonisani. Le mibono igxilile kuyo.
Ukushicilelwa okunganakiwe kusiza kakhulu kulabo abanomuzwa wokuthi kuyasetshenzwa ngakho balilahle lonke isiko. Ngihlangana nenqwaba yabo. Labo abathola okuqukethwe okwamukelwe bazoqhubeka nokuzibukela phansi emilayezweni evamile. Owami umuzwa wokuthi kukhona odinga ukukhuluma nabacabanga kahle. Kuphinde kube umkhakha okufanele kubhekiselwe kuwo. Yona kanye le nto yokuthi iqiniso alibalulekile kodwa likhathalela iziwula zasemakhaya kuphela, nomgomo wamanga angcwele ukuthi singalishicileli iqiniso, yilo elidala ukuthi silahlekelwe amadodana ethu angcono kakhulu sihlale nalabo abadla lezi zivivi. Lokhu isipiliyoni sami esiphambene. Ubuzile, ngakho ngakutshela.
Mayelana nokubambelela emithonjeni yasendulo emelene neqiniso ngenxa yokwesaba okufana nokwakho, anginalutho ngaphandle kokuletha i-Gemara ku-Yoma Set AB:
UDamar Rabbi Yehoshua Ben-Levi: Kungani ibizwa ngamalungu e-Knesset - abuyisele umqhele enkazimulweni yawo yangaphambili. Wathi uMose endodeni enkulu nowesabekayo, U-Atha Jeremiya, wathi: “Abezizwe baseKarkirini ethempelini lakhe; Akashongo kabi. UAta Daniel wathi: Abezizwe bagqilaziwe emadodaneni akhe, Aya amaqhawe akhe? Akashongo qhawe. Naye akekho futhi bathi: Kunalokho, ubuqhawe bobuqhawe bakhe obunqoba umuzwa wakhe wemvelo, onikeza ubude kwababi. Futhi lezi yizinto ezesabekayo zakhe - ukuthi ngaphandle kokwesaba koBusisiwe kungaba njani isizwe esisodwa phakathi kwezizwe? Futhi u-Rabbanan Hichi uyisigqila sami futhi obaluleke kakhulu ku-Teknat Datkin Moshe! Wathi uRabi u-Elazar: Njengoba ekwazi koBusisiweyo ukuthi uqinisile, ngakho-ke abamqambanga amanga.
Ngivame ukuthethelela izimangalo zami futhi ngingazidonseli emithonjeni eyahlukene, i-Leibowitz (engingavumelani nayo cishe nalutho) nanoma ubani omunye. Uma uthola ukufana phakathi kwabo noLeibowitz kuyisinqumo sakho, kodwa akuhlangene nengxoxo ngokwayo. Kuyadabukisa ukuthi noma ubani oshumayela ukuze akhe imibono yezwe ngokuvumelana neziqubulo zabanye usola abanye ngesimo sengqondo esinjalo. Ongafanelekile kuMomo.
URabi uMichael Shavuot Tov
Okungukuthi, ukuthi angicabangi ukuthi ukunakekela nomthandazo kusesigabeni samanga angcwele,
Ngakho ngikubuze ukuthi uvelaphi,
Bavuma ngokuphelele ukuthi abantu bayabuza noma bayangabaza ukukhuluma iqiniso [futhi inqwaba yalokhu ayikuthetheleli nhlobo ukuvezwa obala futhi ngokuphathelene nokuqondisa nomthandazo wangasese ikakhulukazi kuyilapho iningi lamakholwa lizizwa libhekwe ngamehlo futhi ligadwa ngasese ngaphansi kwawo wonke umuntu]
Angicabangi nakancane ukuthi ukugadwa ngasese kanye nomthandazo kuyingxenye yemibuzo mayelana nokukhuluma iqiniso noma ukungabi khona kwalo noma izinto ezidinga isambulo,
A] ngoba asikho isidingo sokusho ukuthi kunjalo,
B] akafaki isandla nganoma iyiphi indlela,
C] Uma uNkulunkulu ekwazi ukusiza umuntu ongenacala futhi engakwenzi, empeleni usola yena ngokungami egazini likamakhelwane [kuyiqiniso ukuthi akayena umakhelwane,] ngokombono.
Kufanele unqume ukuthi isimangalo sakho sihambisana yini nengqikithi yodaba, ukuthi engikushoyo akulona iqiniso, noma ukuthi uthi kufanele ngiqambe amanga “amanga angcwele” ukuze ngingacasuli ukholo lwabantu olungenacala.
Angizange ngisole uNkulunkulu ngalutho. Wayengadala umhlaba owawungeke ulawulwe yimithetho kodwa wanquma (futhi mhlawumbe wanambitha naye) ukuwenza ngokuvumelana nemithetho. Noma kunjalo, ucabanga ukuthi wayengeke asize ekuQothulweni Kwesizwe noma kunoma iyiphi enye inhlekelele? Pho kungani engasizi? Kungani ucabanga ukuthi ngisola yena ngaphezu kwakho? Nokuthi ngavuselela ukuthi abantu bayahlupheka emhlabeni?
Kodwa zonke lezi zinto zizochazwa kahle encwadini yami.
Okokuqala, angizange ngibone izimangalo ezifana nezakho zokuthi akukho nhlobo ukugada,
Futhi angicabangi ukuthi kungamanga angcwele, uma kunjalo ngempela kungani ungakushiyi kanjalo,
Mayelana nemithetho, ukulungiswa kwemithetho yendalo engashintshile okusho ukuthi akukaze kube khona ukugadwa, noma imithetho enezinsuku?
Ngokuqondene nokuQothulwa Kwesizwe, njll., uma konke kuhambisana ne-akhawunti ngakho-ke angazi i-akhawunti kodwa ngeke iphikisane nokholo lwami olula futhi akukho mthwalo,
Uma ingekho i-akhawunti [ukuqondisa] emuva uKushia eDukhta,
I-Haftarah cishe inokunambitha, kulungile,,,
2. Ngachaza ukuthi kungani ngingayishiyi.
3. Imithetho yemvelo, okwathi lapho ingaziwa uNkulunkulu wazivumela ukuba aphambuke kakhulu kuyo, futhi namuhla isijwayeleke kakhulu cishe akakwenzi lokho.
4. Kwakungekho mbuzo futhi akazange adonse ndawo. Uma ucabanga ukuthi konke okwenzekayo kunesizathu (ngaphandle kokuthi awuqondi), pho yini eyenza kube nzima kimi? Phela, ngisho noma, ngokubona kwami, yonke into inganakiwe, nokho okwenzekayo yilokho kanye okufanele kwenzeke, ngakho yini inkinga ngoNkulunkulu, ngokubona kwami? Phela akekho umuntu ohlupheka ngaphezu kokumfanele.
29 Elul 09 - 2016/15/07 ngo-XNUMX:XNUMX
Sawubona Rabi Michael
Ngakho-ke, mhlawumbe kuhle ukuthi lokhu kunjalo, inkinga ivela ku-Torah evela kubaprofethi nasemiBhalweni, futhi izaba zokuthi kwakukhona izindaba ezinde kuphela ku-Talmud ziphikisana nalolu daba, inkinga yokuqeqeshwa ku-Chazal.
Ngichaze kahle ukuthi kungani yebo uyishiye,
Umbuzo uwukuthi, lisho ukuthini, "linayo enye incazelo?"
Eyokuqala ayinangqondo, eyesibili, uma ingahlobene nomvuzo nesijeziso nganoma iyiphi indlela [ingabe ukhona umvuzo nesijeziso?] Uma ingekho i-akhawunti [ukuqondisa] cishe akunjalo, khona-ke yini esele ngempela ..ngiyazama ukucabanga i-hypothesis ngaphandle kwempumelelo,
Ukuthula kweCapricorn. Ngicabanga ukuthi sesikhathele.
29 Elul 09 - 2016/15/08 ngo-XNUMX:XNUMX
Ilapha impela angizange ngizizwe ngiphelelwa amandla,
Futhi ngomhlaka-XNUMX ngingajabula ukuthola impendulo yalesi siqephu engisibhalile
Angiqiniseki ukuthi ngiyaqonda ukuthi kungani izinto lapha zibhekiselwa kuzo. Ngicabanga ukuthi ikhuluma ngesizathu esenza ukuthi uNkulunkulu adale umhlaba ukuthi ubuswe ngumthetho. Ngingaphakamisa ukunambitheka okukodwa, isibonelo ukuthi ufuna sikwazi ukuzijwayeza emhlabeni. Uma kungenziwanga ngokusemthethweni ngeke ukwazi ukuqagula ukuthi kuzokwenzekani kunoma yisiphi isimo futhi ngeke ukwazi ukuphila.
Konke okunye okubhalile angikuqondi ngempela. Kodwa ngicela uma zingekho izinto ezintsha ngempela, sizogcina lapha. Kwakuwumkhuba wami njalo ukuphendula yonke i-imeyili, kodwa le sayithi idinga isikhathi esiningi kimi, futhi okuningi kuwukuphindaphinda kwezinto eziye zabhalwa futhi zashiwo.
29 Elul 09 - 2016/15/09 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngokusobala kunokudideka ngempela phakathi kwama-imeyili lapha ngoba bengingaqondi ngempela ukuthi kungani i-haftarah esiyiqeda amandla lapho ngingaziphindaphindi ngisho nakanye,
Ngizophinda ngilayishe okubhalile futhi ngikuphendule, lapha,
URabi Makal wabhala ,,,
1. Ngakho-ke? [Kwakuhlobene nolwazi lomuntu siqu]
2. Ngachaza ukuthi kungani ngingamshiyi [Mayelana nokuqondisa]
3. Imithetho yemvelo, okwathi ngesikhathi ingaziwa uNkulunkulu wazivumela ukuthi achezuke kuyo kakhulu, futhi namuhla seyijwayeleke kakhulu cishe akayenzi.[Umusho engingawuqondi]
1] Ngakho-ke mhlawumbe kuhle ukuthi lokhu kunjalo, inkinga ivela eBhayibhelini elilotshwe ngokuphambene nokusho ukuthi kwakukhona kuphela ihora kanye nezikhathi eziphikisanayo izindaba ezinde kuTalmud, inkinga yokuqeqeshwa abahlakaniphileyo ngeke baphendule imibuzo,
2] Ngichazile futhi ngizofingqa, angicabangi ukuthi ukugadwa kwangasese kanye nomkhuleko kuyingxenye yemibuzo nezisombululo mayelana nokukhuluma iqiniso noma ukungabikho kwalo kulawo mashumi ambalwa owasho ukuthi uyasetshenzwa ikakhulukazi lapho singekho isidingo ithi ngempela kunjalo,
3, XNUMX, XNUMX, XNUMX….
4] Ubhale ukuthi mhlawumbe u-Gd unephuzu esinqumweni sakhe sokungabuki futhi ngeke kuphikisane nombuzo wemfanelo osebenza kuye,
Ngabuza, uma ukunambitheka kwayo kuyinto esingayazi, enye into enengqondo, kuzwakala kungenangqondo,
Uma ukunambitheka kuyinto engavamile kodwa ezwakalayo kodwa engahlobene nomvuzo nesijeziso [futhi uma kungekho ukubala nokugadwa cishe akunjalo] angiboni uhlangothi lapha,
1. Ngathi kimina akunandaba ukuthi akekho osho njengami. Kungani kufanele nginikeze izincazelo?
2. Futhi ngachaza ukuthi kungani yebo uyishiye. Ngithe ngihlangane nabantu abaningi umthandazo nokugadwa okuyizona kanye izinkinga. Yini evuselelwe lapha?
3. Emandulo isayensi yayingaziwa futhi abantu babengazi imithetho yemvelo. Ngakho-ke kungenzeka futhi kungokwemvelo ukuchezuka kubo. Namuhla siyabazi. Ngokwesibonelo, babecabanga ukuthi liyana ngenxa yemithetho. Namuhla sazi kusengaphambili ukuthi ingakanani imvula enile futhi nini, nokuthi kuncike emithethweni ye-meteorology hhayi i-mitzvos.
4. Ngangingaqondi ukuthi ngabhala kuphi ukuthi uNkulunkulu unesizathu sokungabuki. Ngibhale ukuthi ubengabhekile. Ukunambitha? Mhlawumbe iqiniso lokuthi sesiyizingane ezinkulu futhi akufanele sinikezwe isandla. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinkolelo-mbono, umbuzo oyiqiniso uthi kungenzeka yini ukuthi angamele? Ngombono wami - cha.
Ngiphinde ngibhale ukuthi sesiphelile.
URabi Makal wabhala
Kodwa wanquma (futhi mhlawumbe wanambitha kanye naye) ukukwenza ngokuvumelana nemithetho.
Mhlawumbe iqiniso lokuthi sesiyizingane ezinkulu futhi akufanele sinikezwe isandla.
Injalo ke impendulo ngaphandle kokumela igazi labanye ??izingane ezinkulu ???
Uma lokhu kuwumkhuba kusho ukuthi sesikhathele ngempela kodwa awunaso izinsolo emehlweni ami ngokukhipha okusemthethweni okungenasisekelo njengoba ngivame ukusolwa lapha,
Ukuthula kweCapricorn. Uphinda futhi izinto osekuxoxwe ngazo kwaze kwafika emongweni.
Sengike ngachaza kuwena ngokungabi bikho kokuntwela kokusa endabeni ethi “awuyikuma” eqondiswe kuwe ngokufanayo.
Angithandi ngempela, kodwa kimina sesiqedile.
Sawubona Rabi Michael,
UNgangezwe Lakhe uyakwazi ukufunda phakathi kwemigqa
Ngiphendule, ngineholo kanye nenhlawulo, ukuthi i-akhawunti iqhutshwa kanjani angikwazi,
Kodwa ungangeneleli uma wopha ngoba usuyafa, ??. ??
Uma uphelile ,,,, impilo yonke ,,
Ingabe urabi akakuboni ukubuya kwabantu bakwa-Israyeli ezweni lakhe ngemva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokudingiswa futhi ngokushesha ngemva kweminyaka emithathu ngemva kokuphela kokuQothulwa Kwesizwe njengento ehlukile endalweni? Akufanele yini lokhu kubhekiselwe ekuphatheni kukaNkulunkulu?
Ukubuyela kwabantu bakwa-Israyeli ezweni labo kuyisenzakalo esingavamile ngempela emazingeni omlando, kodwa umlando uyinto eyinkimbinkimbi futhi ayikho indlela yokwazi ukuthi kwaba khona yini ukungenelela kukaNkulunkulu lapha. Sekukonke ngicabanga ukuthi le nqubo ingaqondwa kahle nangaphandle kwesidingo sokubandakanyeka kwayo. Abantu bezwe bayayibona le nqubo futhi abaphuli izinkolelo zabo zokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu-ngokwesayensi.
Ngakho-ke, ukudweba iziphetho ezivela "esimangaliso somlando" kuyinto eyingozi kakhulu futhi engagculisi. Lokhu mhlawumbe kuhlukile esimangalisweni esingokomzimba.
Nakuba kungase kube nesisindo eqinisweni lokuthi abaprofethi babikezela ngokubuyela kwabantu ezweni labo kusenesikhathi, futhi ngalomqondo kungase kube khona indawo yokubona lenqubo njengenkomba yokuhileleka kukaNkulunkulu. Angazi. Ngiyazi nje ukuthi noma lokhu kungenzeki cishe akekho obeyolibamba ngekhanda iBhayibheli lakhe (ikakhulukazi bebeyofuna amavesi afanele futhi bawakhiphe ebululani bawo), ngakho-ke kunzima kimi ukusho ukuthi kunesisindo esikhulu kakhulu sezibalo. kulezi ziprofetho. I-thesis engamelani novivinyo lokuphikiswa nayo ayihlaba umxhwele kakhulu lapho igcwaliseka (phela, kwakukhona iziprofetho ezingazange zigcwaliseke ngempela futhi akekho owayeyesaba). Ngaphezu kwalokho, lezi ziprofetho ngokwazo zabamba iqhaza ohlelweni uqobo (sibonga ukuthi sibuyele lapha). Kuyisiprofetho esizigcwalisayo, ngokwezwi nezwi.
29 Elul 09 - 2016/15/11 ngo-XNUMX:XNUMX
Kubonakala kimi ukuthi i-Kikro kufanele ishiwo / ibhalwe ngesiHeberu. Futhi, ingcaphuno evela egameni lakhe ihlotshaniswa noPublius Trentius Ash.
Oh, bengingacabangi ukuthi izoshicilelwa ngokushesha kodwa izothunyelwa kumhleli wesayithi. Ungasusa lawa mazwana kanye nangaphambi kwawo.
Impela iza kimi, kodwa ikhompuyutha yami ayiphenduli. Ngakho ngagunyaza ukushicilelwa futhi manje ngakwazi ukuthumela impendulo yami. Ungu:
Kungani ukususa? Imibono emibili okufanele bonke abafundi bethu bafunde kuyo. Esokuqala anginaso isiqiniseko. Igama ngesiLatini lithi Cicero, futhi angiboni ukuthi kungani ukuphinyiselwa kwegama kufanele kushintshwe. Uma othile e-US ebizwa ngokuthi uDavid, kufanele ngimbize ngesiHebheru uDavid. Angicabangi kanjalo.
Futhi ngangingaqondi nakancane ukuthi kungani kufanele ngihumushele isiLatin C inkawu yesiHebheru (njengoKhesari esikhundleni sikaKhesari ekuqaleni).
Mayelana nesesibili, ngiyabonga kakhulu. Kwaphela iminyaka ngicabanga ukuthi igwegwile. Manje usungumfundisi onolwazi.
Ngiphinde ngathumela impendulo yakho yesibili, kodwa nje ukuba nesikhathi esiphusile. Uma ubona ukuthi owokuqala weza ngqo kusayithi (ngakho ucabange), kufanele uqonde ukuthi owesibili uyafana. Njengoba kushiwo, ngigunyaze zombili ukuthi zilayishwe (le yindlela isoftware eyakhiwe ngayo ukuthi yonke into iza kimi). Ngivumela yonke into, ngaphandle kwezinto ezingafanelekile (okwamanje i-BH yayingekho).
Sobabili kwizinzalamizi (P. Property Torah, c):
Ofunda kuso isahluko esisodwa noma ihalakha elilodwa noma ivesi elilodwa noma inyosi eyodwa ngisho nencwadi eyodwa kufanele amhloniphe ngoba samyala uDavide inkosi yakwa-Israyeli owayengafundanga ku-Ahithofeli kodwa izinto ezimbili kuphela futhi wafunda umfundisi wakhe omkhulu futhi wazi. ukuthi kwathiwa Futhi okunolwazi futhi okungezona izinto ezilula nezinto ezibonakalayo futhi lokho uDavid Meleki Yisrael angazange akufunde ku-Ahithofel kodwa izinto ezimbili kuphela ezifundwe uRabi Alufu kanye nomngane wakhe ofunda kumbhali wakhe isahluko esisodwa noma i-halakhah eyodwa noma ivesi elilodwa noma inyosi eyodwa ngisho incwadi eyodwa kweyodwa ukuthi ingakanani futhi ingakanani inhlonipho okufanele ihlonishwe futhi ingabi nanhlonipho kodwa iTorah yathi + IzAga XNUMX: XNUMX + Dumisani izazi ziyodla ifa + uShemi / IzAga / XNUMX Y + futhi abantu abangenacala bayothola ifa elihle futhi akukho okuhle ngaphandle kweTora. lokho okushiwo + uShembe / Izaga / XNUMXb
Futhi futhi ku-BM Lag AA:
Vumela uRabbanan: URabi owathi - Rabi owafunda ukuhlakanipha, hhayi uRabi owafunda iBhayibheli neMishnah, amazwi kaRabi Meir. URabi Yehuda uthi: Konke lokho okuningi kokuhlakanipha kwakhe kulungile. URabi Yossi uthi: Akazange akhanyise ngisho namehlo akhe ngaphandle kwe-mishnah eyodwa - lo urabi wakhe. URaba uthe: Njengo rabi wezimpahla, uDasburn Zohma Listron.
Futhi ukuthi kufanelekile ngomfundi ukuba asule amazwi enkosi yakhe, iqhawe lakhe kanye nomaziyo wakhe?
Ngiyabonga kakhulu ngezincomo eziyihaba ngandlela thile :). Mhlawumbe ngizothatha lapha isifundo kimi ukubonga orabi inqwaba yezibalo. Ngibonga kakhulu ngezinkulumo zenu nezincwadi zenu ezingivulele iminyango ezindaweni eziningi, futhi zacebisa ulwazi lwami kwezinye izindawo eziningi.Ngizokubiza ngokuthi “ubufakazi obuvela kushokoledi.” 🙂), nganweba umbono wami, futhi ngezinye izikhathi wasungula iholidi lomphefumulo wami.
Futhi ngenxa yalokhu, angizange ngifune "ukufundisa u-Halacha" kurabi. Futhi ngasikisela ukususa, njengoba ngangicabanga ukuthi kwakuyokwanela ukulungisa indikimba yesihloko uma urabi ekuthola kufanelekile, futhi akunandaba ukubukeka kwempendulo ngokwayo. Futhi, njengoba kushiwo, ngazizwa ngingakhululekile ukukhomba nge-wavy brush ngephutha, uma ngempela kuyiphutha.
Eqinisweni, ngokwazi kwami ​​konke, indlela yokuphimisela yesiLatini empeleni ithi cicero (ngesiNgisi sanamuhla, mhlawumbe ongqondongqondo bayihlanekezele). Umbuzo ovela kuDavid uveza inkinga uma kukhulunywa ngegama okwaziwayo ukuthi laqalwa kodwa eliye lasetshenziswa ngendlela ehlukile ngamasiko ahlukene, futhi uphakamisa inkinga ekusetshenzisweni kwegama njengokulandelana kwezinhlamvu noma njengetemu elisebenzisa igama elithi into futhi ngencazelo yayo. Kodwa kimi kubonakala sengathi igama lesiteketiso elithi Chitsro, uma ngempela liqashelwa kwa-Israyeli, alinamandla, futhi alithwali icala lamasiko kangangokuthi ukusetshenziswa kwe-cicero ngeke kuqondwe kubantu noma kuzobaphuca incazelo yegama. . Kubukeka kimi futhi ukuthi ngokwemithetho eyamukelwayo yokuhumusha namuhla ukusetshenziswa kwefomu le-Tsizro kuncishisiwe.
Mayelana nokuzijabulisa okunengqondo, njengalowo okufanele, njengoba kushiwo, kufanele futhi ngibonge ingxenye enkulu yolwazi lwami emkhakheni we-logic, ngithemba ukuthi ngifunde ngokwanele ukuze ngingehluleki kulokho okuncane. Ngicabange ukuthi impendulo yami yesibili izoshicilelwa ngokuzenzakalelayo, kodwa bengingayazi enye indlela yokuzwakalisa isifiso sami sokuthi eyokuqala isuswe, ngaphandle kwempendulo yakhe, lapho ngithe angikholwa ukuthi indlela ukushicilelwa ngokushesha. Ngicabange ukuthi ekugcineni umuntu owethembayo uzozibona, kanye nesicelo sokusula esisanda kushiwo.
Futhi futhi ngiyabonga kakhulu.
Kuwumkhuba kababa ongasekho (owayefunda isiLatini) ukuthi ukuphimisela ekuqaleni kwakunguTszero (noKhesari). Nalapha futhi, umpetha norabi onolwazi. 🙂
21 ka-Shivat 02 - 2017/14/43 ngo-XNUMX:XNUMX
Uthi noma ungakhipha isitatimende senani elibanzi esethi yemithetho, awuboshiwe yiso.
Nami, futhi, (ngezinga elithile ngisabambe) lo mbono, ngakho-ke angizizwa ngibophekile ukunanela i-ethnocentrism noma i-chauvinism evela ebuJudeni (ngaphezu kwalokho, ngangi - futhi ngokwezinga elithile ngisesekhona) ngiqhuba i-minimalism yokuhumusha futhi ngithi kukhona akusona "isitatimende senani" ku-halakhah. Azikho izitatimende eziphakamayo - azinankinga noma azinambi; indawo ethize yokuhlaziya).
Kodwa muva nje ngiye ngathamba futhi ngivame ukuqaphela izitatimende ezithile zenani ezingase zibe khona emcabangweni (ukuphika imali mboleko, ukulangazelela ubukhosi, ukusungulwa kweThempeli, isifiso sakho konke ukuzithoba ebuJudeni emhlabeni), yingakho ukwazana kwami ​​kwangidonsa amehlo. eqinisweni lokuthi Cabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna wenze okuthile, nakuba engakuyalanga ngokucacile, kungani ungakwenzi (okungukuthi izinto ezimbili sezishintshile - 1. Ngabona ukuthi isitatimende senani elibi kakhulu savela 2. Ngaqiniseka ukuthi izitatimende ezivela kuShittin ziyabophezela).
Ukube umbuzo ubungami kuphela, ngabeka izindlebe, kepha orabi bethu sebevele sebekuqinisekisile ukuthi intando kaNkulunkulu ibopha yona ngokwehlukana neTorah - isibopho sokulalela amazwi ezazi njengoba aziwa Yena ”(lapho ekugcineni IHasbra iyisilinganiso sokucacisa intando kaNkulunkulu).
Okungukuthi, ngemva kokuvuma ukuthi intando kaNkulunkulu iyinto ebophayo, ngaphikiswa ngokuthi ingqondo yezazi - okungenani ekufundiseni 'sokuziphatha' (hhayi ngomqondo wokuziphatha vele, kodwa njengemihlangano yokuziphatha) - into ebophayo ngoba njengoba nje bengochwepheshe ekuqondeni iHalacha nokuma intando kaNkulunkulu.” Engqikithini yayo, cishe bangochwepheshe ekuqondeni ukuthi iyini intando kaNkulunkulu (lokhu kungokwengeziwe emibhalweni yokuthanda kwama-mitzvos kumaRishoni kune Tannaim no-Amoraim, ngokusobala abangazange bazame ukuqagela imfundiso ethile kodwa futhi bathola izitatimende ezinokubaluleka ezifana nalezi).
Manje umphefumulo wami embuzweni wami - ingabe unazo izaba zokuyeka ukufeza intando kaNkulunkulu njengoba yembulwa emehlweni akho ekugcineni iTorah?
Uma ngikwazi ukuthola isitatimende senani esivela kuTorah ngokuqinisekile kulindeleke kimi. Lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngisho noma kungeyona iHalacha ngempela.
Kodwa isitatimende senani esivela ku-sage asibophezeli. Ngokubona kwami, abahlakaniphileyo ababona ochwepheshe (hhayi njengoba ubhale). Igunya lezihlakaniphi alisuki eqinisweni lokuthi ziqinisile, kodwa eqinisweni lokuthi silitholile igunya lazo (bona K. R.P.B. Kunezizathu ezinhle kakhulu zalokhu, kodwa akungenxa yokuthi zingochwepheshe. Futhi manje uzoqonda ukuthi sithole igunya labo ezindabeni ze-halakhic kodwa hhayi ezindabeni ze-meta-halakhic noma zenani. Kuphela uma sebenqume ukuyifaka ku-halakhah (njengokuphoqelela izinga lobudoda nokunye okunjalo) lapho-ke kuyasibophezela. Yebo, uma sivumelana nabo, sizokwenza kanjalo, kodwa uma kungenjalo, akudingekile ukwenza kanjalo. Ngokuphambene nalokho, kuyadingeka ukwenza okuphambene ngokuqondile ngoba i-Hasbra inesimo esibophayo.
Futhi okufunwa yintando kaNkulunkulu akuveli emakhanda e-yeshivot owasungula okuthile kodwa kuvela eGemara nabo bonke bokuqala, futhi izinto zakudala. Yize kunamaphutha ahlukahlukene kulokhu, futhi ubone izindatshana lapha esizeni ukuze uthole izincazelo: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
25 Sivan 06 - 2019/15/38 ngo-XNUMX:XNUMX
I-BSD XNUMX ku-Sivan A.T.
Ezingxoxweni phakathi korabi ngendaba yokubeka usuku lwesikhumbuzo sokuQothulwa Kwesizwe - bheka izindatshana zikaRabbi Shmuel Katz, 'Ukubhujiswa Nokukhunjuzwa' kanye 'Usuku Lokuqala LokuQothulwa Kwesizwe', kanye nendatshana kaRabbi Yeshayahu Steinberger, The Wound Before Healing. Bobathathu kuwebhusayithi ethi 'Shabbat Supplement - Makor Rishon', nasezimpendulweni zami ezihlokweni ezingenhla.
24 Kislev 12 - 2019/12/23 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngizoxolisa kusenesikhathi ngifunda okuqukethwe kule sayithi okokuqala futhi angazi noma imibuzo yami noma izimpendulo zayo zivele ezihlokweni noma emibuzweni yabaphenduli lapha.
1. Uma ucabanga ukuthi uNkulunkulu useyekile ukugxambukela kulokho okwenzeka emhlabeni wethu, ungachaza kafushane imiqondo eyisisekelo ebuJudeni njengokuthi
B. Umvuzo kanye Nesijeziso - Kubonakala kimi ukuthi uMaimonides (ngibhala ngekhanda hhayi ekubuyekezweni encwadini) uthi inkambo yemvelo yomhlaba iqhutshwa ngenxa yokuziphatha kwangasese kwamaJuda njengokuthi futhi nginikeze imvula ngesikhathi, njll.
2. Ngabe ucabanga ukuthi ukuthandaza ka-3 ngosuku sekungenasidingo ngoba kungekho okhuluma naye? Ingabe konke okusele kuyinkokhelo ye-halakhic eye yachithwa mhlawumbe isizathu esikhulu sokucela izidingo zakho kumuntu ongakwazi ukukunikeza?
Kungenzeka yini ukuyeka iRosh Hashanah lapho wonke umuntu emhlabeni edlula phambi kwakhe njengamadodana kaMeron?
4. Ngabe udumo lwakhe luyacabanga futhi angiqondile ukuqhathanisa uKhu njengoba bethi labo ababecabanga ukuthi uShiva walala? Noma ushiye umhlaba wakhe?
Uma izinto sezixoxiwe ngengosi ngingajabula ukwamukela ireferensi yezindawo ezifanele uma isikhathi sakho singakuvumeli ukuthi uphawule.
24 Kislev 12 - 2019/17/22 ngo-XNUMX:XNUMX
Ubuza imibuzo eminingi ebanzi futhi kunzima ukuphendula lapha. Ungathola zonke izimfundiso zami ngalezi nezinye izihloko ku-trilogy entsha, nakulezi zihloko encwadini yesibili (akekho umuntu ongumbusi emoyeni). Ngale kwalokho ungasesha isayithi lapha futhi uthole izinkomba eziningi kumbuzo ngamunye wale mibuzo.
NgoLwesithathu eTammuz 25 - 06/2020/15 ngo-19:XNUMX
I-1) Ngokuphathelene nokungafani ekubuseni kukaMaimonides nokunye okunjalo, akuhlangene ne-meta-halakhah, kodwa incazelo ye-halakhah yenziwa ngendlela ethile kodwa isinqumo sayo asihlobene ngempela (mhlawumbe ingaba wathi akuhlobene ngempela).
Isibonelo: "U-AR Acha Bar Hanina uyabonakala futhi waziwa ngaphambi kwalowo owasho futhi waba yizwe ukuthi akekho esizukulwaneni sikaRabbi Meir onjengaye futhi kungani engazange amise i-halakhah enjengaye ukuthi abangane bakhe babengenakuma ekugcineni. ngombono wakhe ukuthi usho ngokuhlanzekile okungcolile futhi ambonise ubuso obuhlanzekile Siyabona ukuthi nakuba izazi zazi ukuthi urabi ohlakaniphile (futhi mhlawumbe olungile kubo) akazange abuse ku-halakhah efana neyakhe.
Futhi ekhasini elifanayo ( Eruvin XNUMX :) isizathu siwukuthi i-Halacha Kavah inikezwa nakuba i-Shabash ilolongwa nguTapi futhi kungenxa yokuthobeka kwabo futhi akubonakali kimi ukuthi othile ucabanga ukuthi ukuthobeka kuholela eqinisweni. iqiniso (yize izikhathi eziningi Izinto ziba bukhali futhi zicace).
Ngokubona kwami, kucace bha ukuthi ongqondongqondo (ngokungafani nabaxazululi ...) be-halakhah bahamba ngendlela ecacile nengaguquguquki, ngemuva kwakho konke, sithole abaningana babo abavamisile ukubusa njengabo futhi ezimeni ezimbalwa kuphela ababebusa. njengabo. Ngamanye amazwi, ayikho incazelo esitatimendeni sokuthi i-Maimonides ayinakho ukuvumelana kwe-meta-halakhic ngoba kunencazelo esinqumweni se-meta-halakhic.
2) Urabi wanquma ngesizathu esithile ukuthi isimangaliso ukuthi akanalo ithuba lokuba ngaphandle kokungenelela. Uyithathaphi le ncazelo?
Okuxakayo ngalo mbono wukuthi kunoma ngubani owake waphatha ibhayibheli ngesandla kuyacaca ukuthi naphezu kwazo zonke izimangaliso zakhona bawona inhlawulo nokuhlubuka (ngokusho kukaRabi ngaleso sikhathi kwenzeka izimangaliso) futhi uma sithi izimangaliso. yinto engeke yenzeke ke sathi zonke lezozizukulwane zaziyinqwaba yezilima (Don Ku and what today amashumi ezinkulungwane ayaphenduka ngenxa "yezimangaliso" zikaBaba namacharlatans and even more than those there are religions who not sin for. ukwesaba ukujeziswa abangabonanga kubo Ku ndodana ka Ku ndodana ngaleso sikhathi ababengezona izoni)
Ngicabanga ukuthi isimangaliso singamathuba aphansi ezibalo okwenzekayo ngakho-ke kukhona ukuvuleka kwabaphikayo (ngisho nangesikhathi sabaprofethi) ukusho ukuthi lokhu kungokwemvelo futhi akuyona isimangaliso. Ngokunjalo nasesizukulwaneni sethu sinezimangaliso. (Ngiyayazi inkinga yalesi simangalo, ngoba kuvele ukuthi ngokuthuthuka kwesayensi, izinto ezazithathwa njengengqungquthela ngenxa yokuthathwa njengezintekenteke namuhla sizokwazi ukuthi zenziwa. Kodwa ziseziningi izinto - lapho abantu babuyela ezweni lakubo
3) Urabi wabhala “Kodwa angicabangi ukuthi sebengene ekujuleni kwencazelo yalo. Inhloso karabi kwakuwukusho ukuthi ungumZiyoni wezwe, njengoBen-Gurion. "
Sibonga urabi ngokubeka amahlaya kanye namahlaya asukumayo emazwini akhe. Kuthambisa ukufunda….
(Angikholwa ukuthi uyakholelwa kulokhu).
NgoLwesithathu eTammuz 25 - 06/2020/15 ngo-28:XNUMX
Ngikwelule konke enikubhalile lapha ezindaweni ezahlukene.
1. Angisakhumbuli ukuthi wayekhuluma ngani (okungafanani). Kodwa mayelana nesinqumo se-Knesset, ngake ngabalula njengobufakazi bokuthi i-halakhah ayilona iqiniso ngaso sonke isikhathi kodwa inenani lokuzimela (ukubusa njengoba ngiqonda ngisho noma ngokubona kwami ​​lokhu akulona iqiniso). Mayelana neBS neBH, abahlaziyi bahlukene phakathi ngalokhu. U-R.I. Karo emithethweni yamaGemara uchaza ukuthi ukuthobeka kwabo kubaholela eqinisweni (ngoba baqale bacabangela amazwi e-B'Sh ngaphambi kokuzakhela owabo isikhundla) ngikwelulele lokhu kuTuba ngamavesi ambalwa.
2. Kulokhu nganweba uTuba encwadini yesibili ku-trilogy (futhi nalapha kusayithi ezindaweni eziningana). Asikho isilwane esifana nesimangaliso ngaphakathi kwemvelo. Osho njalo uvele adideke.
3. Angikholwa nje kuphela kodwa ngiqiniseka ngokuphelele. Urabi wasePonivez wayengumZayoni ongagxilile.
Doron Vuliwe Ingabe iLehavah iyinhlangano ecwasa ngokwebala? (Ikholomu 484)
angikuqondi Vuliwe Ingabe iLehavah iyinhlangano ecwasa ngokwebala? (Ikholomu 484)
Hananeli Vuliwe Ingabe i-Iran ilapha? Mayelana Nenqubekela-phambili kanye Nenkululeko Ehlanzekile (Ikholomu 483)
Angizange ngiyiqonde inhloso yendaba, ngaphandle kwenganekwane yayo Vuliwe Ingabe i-Iran ilapha? Mayelana Nenqubekela-phambili kanye Nenkululeko Ehlanzekile (Ikholomu 483)